၂၀၂၅ မတိုင်ခင် အပြောင်းအလဲကြီးတခု ခန့်မှန်းထားတယ်
17 December 2019AA
အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့တွေကြား Bilateral (ပဏာမ အပစ်ရပ်ရေး) စာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု တွေ ရှိပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာဆိုရင် တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေ မရပ်မနားဘဲ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွား နေတာ တနှစ်ကျော်ပါပြီ။ အရပ်သားတွေ ထိခိုက်သေဆုံးမှုနှုန်းကလည်း ပို မြင့်တက်လာပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ပဋိပက္ခတွေရဲ့ အလားအလာ၊ ပဋိပက္ခတွေ ကြားထဲက ချင်းလူမျိုး တွေ နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ စီမံကိန်းတွေအပေါ် AA ရဲ့သဘောထား၊ ၂၀၂၀ မှာ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီ အကြီးတန်း သတင်းထောက် နန်းလွင်နှင်းပွင့်က AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေက အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်က တိုက်ပွဲတော်တော်လေး ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် တိုက်ပွဲကလည်း ပြင်းထန်ပါတယ်။ ရသေ့တောင်ဘက်မှာရော မြေပုံမြို့နယ်ဘက်မှာရော တော်တော်ပြင်းထန်တယ်။ ရသေ့တောင် ဘက်မှာ က တပ်မ ၂၂ နဲ့ဖြစ်တာပေါ့။ အဓိကဖြစ်တဲ့ တပ်ရင်းက ၂၀၈၊ တော်တော်လေးအထိနာပြီးမှ သူပိတ်မိနေတာ။ သူ့ကို ရဟတ်ယာဉ် တွေနဲ့ လာပစ်ပြီးမှ မီးခိုးဗုံးတွေချပြီးမှ လာကယ်တာပေါ့ဗျာ။ ထွက်ပြေးလို့ရအောင်။ သူတို့ လူနာတွေ အလောင်း တွေကို ဆွဲထုတ်ပြီး ညပိုင်းအမှောင်ထဲမှာ အမှောင်ကို အကာအကွယ်နဲ့ ထွက်ပြေးပြီးမှ လွတ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များများကိုတော့ သိမ်းဆည်း ရလိုက်တယ်။ ခဲယမ်းတွေ အပါအဝင်ပေါ့။ အဲ့ဒါတော့ ရသေ့တောင် မှာပါ။ ပြီးရင် မြေပုံနဲ့ အမ်းကြားမှာ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်၊ ၆ ရက် နေ့တွေမှာ စကခ ၅ ရယ် ကျောက်ဖြူ က တပ်ရင်း တရင်း ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ၂ ရင်းပေါင်း။ သူတို့ဆီကလည်း ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များများ ကျနော်တို့ သိမ်းဆည်း ထားတယ်။ တိုက်ပွဲမှာ သူတို့လူတွေ ကွဲသွားတယ် ထင်တယ်။ ၃ဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့လောက်၊ သူတို့က ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ လိုက်ရှာပြီး ပစ်ကူတွေ ပေးတာ။
မေး။ ။ တပ်မတော်နဲ့ AA ကြား အပစ်ရပ်ဖို့ စာချုပ်အတွက် တဖက်မှာ ညှိနှိုင်းနေတာလည်း ရှိနေပြီး ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲ မရပ် ဘူး။ စစ်ရှိန်မလျှော့ချနိုင်တာ အဓိက အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က သူတို့ရဲ့ မာနတွေ Attitude တွေပေါ်မှာ မူတည်မယ် ထင်တယ်။ သူကတော့ ပြောနေ တာပဲသူတို့ တိုက်ချင်ရင် ဘယ်ဟာမဆို တိုက်လို့ ရတယ်ဆိုပြီး စစ်ရေးအရ သူတို့ ဘက်က အသာစီးချည်းပဲ သမိုင်းမှာ ရှိတယ် ဆိုပြီးမှလေ။ ဒါ့ကြောင့် သူလုပ်ရင် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အင်အား သုံးတဲ့ အခြေခံစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပဲ ဆိုင်မယ် ထင် တယ်။ နောက်မဆုတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ပြီးတော့ သူတို့ ထင်တာက အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ရက္ခိုင်တပ် အနေနဲ့ ဘေးမှာ မဟာမိတ်တွေမရှိဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ချောင်ပိတ်မိပြီး အပြတ်အသတ်ချေမှုန်းမယ် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်း ချက်တွေ ရှိမှာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူက စစ်ရေးအရှိန်ကို နည်းနည်းမှ အလျှော့ မပေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးတွေပါ။
မေး။ ။ AA က ကချင်၊ ကိုးကန့် စစ်မြေပြင်တွေမှာလည်း အတွေ့အကြုံရှိတော့ အခု ရခိုင်မှာ ကြုံရတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ အရင် ကြုံဖူးတဲ့ အခြေအနေ ဘာတွေကွာခြားလဲ။ တပ်မတော် ဘက်က တိုက်ခိုက်ရေး ဗျူဟာတွေ လက်နက်တွေ ကွာခြား လာ သလား။
ဖြေ။ ။ သူကတော့ အဓိက အဆင့်မြင့်လက်နက်တွေ ဆိုတာထက် Firepower ကို အဓိက သုံးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း သူကိုယ်တိုင်လည်း ထုတ်တယ် ဆိုတော့ Firepowerကို အဓိက သုံးတယ်။ သူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး နည်းဗျူဟာကတော့ ကျနော်တို့က ရခိုင်ပြည်မှာဆိုတော့ ကိုယ်တိုက်ချင်တဲ့ ပုံစံကို ဖော်ပြီးတော့ ပြန်တုံ့ပြန်တာပေါ့။ ရေရှည်မှာတော့ ကျနော်တို့ ဘက်က Morale ပိုင်းမှာ အသာစီးရပါတယ်။ သူတို့ဘက်မှာကျတော့ အထိအခိုက် အကျအဆုံး များလာတာတို့။ သူ စိတ်ကြိုက် တိုက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုး သူပုံသွင်းလို့ မရတဲ့အချိန်မှာ လက်နက်ကြီးနဲ့ လေကြောင်းပစ်ကူပဲ အဓိက မှီခိုရတယ်။ အဲ့ဒါတွေ မလာရင် သူ့စစ်သားက ထွက်ပြေးပြီ။ အဲ့ဒီလို ထွက်ပြေးလို့လည်း ကျနော်တို့ ပစ္စည်းတွေ အများကြီး သိမ်းလို့ မိတာပဲ။ နေ့တိုင်းပဲ။ ဒါ့ကြောင့် Morale ပိုင်းတော့ တော်တော်ရှုံးတယ်။ သူတို့က Firepower နဲ့ပဲ လိုက်ထိန်းနိုင်တယ်။ သူတို့ဆီက သိမ်းလို့ရမိတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ ဂါထာတွေ အင်းအိုင်တွေပဲ အများကြီး သိမ်းဆည်း မိတယ်။
မေး။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်လည်း ကုန်ပြီဆိုတော့ ဒီတနှစ်လုံးမှာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အပေါ် အာရုံစိုက်မှု၊ ဆောင်ရွက်မှုကိုရော ဘယ်လိုများ သုံးသပ်ချက် ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ သူတို့ အခု လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ NCA လုပ်ငန်းစဉ်က တော်တော်လေး ရုပ်နဲ့ နာမ်နဲ့ တောင် ဒြပ်ကွဲနေပြီ ထင်တယ်။ ယုံကြည်မှုတွေလည်း မရှိဘူး။ ပြီးရင် ကတိကဝတ်မှာပါတဲ့ လက်မှတ် ထိုးထားတဲ့အချက် အလက်တွေကိုလည်း တာဝန်ခံပြီးမှ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ မရှိလေတော့ လျှောက်တော့ လျှောက်နေတယ်။ ခရီးက မရောက်ဘူး လို့မြင်တယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးမင်းအောင်လှိုင် ကြားမှာ သူတို့နှစ်ယောက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မအောင်မြင်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကျနော် စဉ်းစားမိတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရ ဦးဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး အောင်မြင်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အမှတ်ကို စစ်တပ်က မပေးချင်ဘူး ထင်တယ်။ သူ့ရဲ့ ၂၀၂၀ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ပွဲအတွက် တယောက်ကို တယောက် ခြေလက် အကာအစီး ရသွားမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေက ရသင့်သလောက် မရဘူးလို့ မြင်တွေ့ရတယ်။
မေး။ ။ Bilateral (ပဏာမ အပစ်ရပ်ရေး) ဆွေးနွေးမှုတွေကရော စားပွဲဝိုင်းမှာ အလုပ်တကယ် ဖြစ်လား။
ဖြေ။ ။ Bilateral ကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့ ၄ ဖွဲ့ပေါ့။ ပြီးရင် FPNCC မဟာမိတ်တွေ ကြားမှာ ရှေ့ကို ရောက်စေချင်တယ်။ သို့သော်လည်း တဖက်နဲ့ တဖက်ကြားမှာ သံသယတွေ အလျှော့ မပေးလိုမှုတွေက များတယ်။ ဟိုဘက်ကလည်း သူတို့ တပ်မတော်မူ ၆ ချက်တို့ လာညှိတဲ့ လူကလည်း အပေါ်ကို ပြန်တင်ပြလိုက်မယ် ဆိုပြီး ပြန်သွားတာ များတယ်။ အစည်း အဝေး ရှိတယ်ဆိုရင် သွားလိုက်လေ၊ အစည်းအဝေးပြီးရင် ဘာမှ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
ကျနော်တို့ဘက်က အဆိုပြုလွှာတခု ရေးထားတယ်။ ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ အတားအဆီးမဖြစ်အောင်တော့ ရှေ့ကို ရောက်နိုင်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဘက်က လက်မခံနိုင်တဲ့ အချက် တွေ ပါကောင်း ပါမှာပေါ့။ သို့သော်လည်း နောက်ဆံ တင်းပြီးတော့မှ အခက်အခဲမဖြစ်အောင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြင်ဆင်ထား တာတော့ ဟုတ်တယ်။ ခါတိုင်းလည်း ရှေ့တိုးမရတဲ့ အခြေအနေတွေပဲ ကြုံနေရတော့ အများကြီးလည်း မမျှော်လင့်ထားတော့ ဘူး။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ဆိုတာကတော့ လောလောဆယ် မီဒီယာမှာတော့ မပြောသေးပါ ဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ တဖက်နဲ့တဖက် တင်းမာမှုတွေ ထိပ်တိုက်တိုးမှုတွေ မဖြစ်အောင် ရှေ့ကို သွားမယ် ဆိုရင်လည်း တဖက် နဲ့တဖက် ညှိနှိုင်းပြီး ရှေ့ကို ရောက်နိုင်အောင် ဆိုတဲ့ အနေအထားတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ စဉ်းစားပေးထား ကြပါတယ်။
မေး။ ။ Bilateral ဆွေးနွေးမှုမှာ မပြေလည်တာက တပ်နေရာ ချထားရေးဆိုင်ရာကိစ္စပဲလား။ တခြားဘယ်လိုအချက်တွေ ရှိသေးလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိက ကတော့ နှစ်ဖက် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်မြေကိစ္စတွေပဲပေါ့။ သူတို့ကလည်း နိုင်ငံဆိုတာ တခုတည်းသော တပ်မတော်ပဲ ရှိတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ရေထု မြေထု ဆိုတာ ခွဲခြားမှု မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ ရပ်တည် ပြောဆိုမှုတွေပဲရှိထားတယ်။ နယ် နိမိတ် ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျေကျေလည်လည် ပြောမယ်ဆိုရင် ရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်သွားတယ်။
မေး။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အရပ်သားတွေရဲ့ သွေးထွက်သံယိုမှုနှုန်းက ပိုများလာတယ်။ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက် သွား မလား။ AA ရဲ့နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်တဲ့ လမ်းမှာ ရခိုင်လူထုက အနာဘက်ကချည်းပဲ ဖြစ်မလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ဘက်မှာ အရပ်သား ထိခိုက်မှုတွေက ၄ လပိုင်းလောက်မှာ ပိုမြင့်လာတယ်။ တိုက်ပွဲအစပိုင်းမှာတော့ အဲ့ဒီ လောက် မများသေးဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ အရပ်သားထိခိုက်မှု များလာတာကလည်း မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လက်နက် ကြီး ပစ်ခတ်မှုတွေက အစတုန်းကတော့ ရွာနားတွေကို လှမ်းပစ်တာပဲရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရွာထဲကို တည့်တည့် ပစ်တာ တွေ ပိုများလာတယ်။ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရွာနဲ့ မီတာ ၁၀၀၀ လောက်မှာ ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တောင် သူ့ရဲ့ အရာရှိတို့ လူကြီးပိုင်း တို့က အနာတရဖြစ်ရင် ရွာကို ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှ ရွာသားတွေကို ဖမ်းဆီးချည်နှောင်တာ နှိပ်စက်တာ သတ်ဖြတ်တာ တောက်လျှောက် လုပ်လာတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို လူမျိုးရေးအရ တော်တော် ဦးတည်ပြီး သတ်ဖြတ်တယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါက အမြင်မဟုတ်တော့ဘူး။ အထောက်အထား အခိုင်အမာရှိထားတယ်။
ကျနော်တို့ ဘက်က ဘယ်တပ်မ၊ ဘယ်တပ်ရင်းက လုပ်ပါတယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း သေချာ စာရင်းယူထားတယ်။ အဲ့ဒီ လို လုပ်တဲ့ တပ်ရင်းတွေကိုလည်း ကျနော်တို့က ဖြစ်ရင် ဖြစ်သလို ပြန်လက်တုံ့ပြန်တာ လုပ်တယ်။ သို့သော် ပြည်သူက တော့ နာတာ ပေါ့ဗျာ။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့ တပ်တွေက ရွာမှာ မနေပါဘူး။ ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေက တောတောင် တွေထဲမှာ လှုပ်ရှားတယ်။ သူတို့က တောတောင်တွေထဲက ယာယီစခန်းတွေကို လာတိုက်ပြီဆိုရင် သူတို့က အဲ့ဒီခွင်ကို ဝင်ပြီး သူတို့အထိနာရင် ဆက်မတိုက်တော့ပဲ ရွာကို တန်းသွားတယ်။ အဲ့ဒီရွာကို ပိတ်ဆို့ပြီး လူငယ်လူရွယ်တွေ ကို ဒုက္ခပေးပြီ။
ပြီးမှ ရွာကို ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတယ်ပြောတယ်။ သူတုိ့ထင်တာ ရွာထဲမှာ လက်နက်တွေ ကျည်ဆန်တွေ ဝှက်ထားမယ်လို့ ထင် တာ။ ရွာသားတွေကို ကြိုးနဲ့ချည် နှိပ်စက် ရိုက်ပုတ်ပြီး လက်နက်ဘယ်မှာ ထားသလဲပြောစမ်း ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တလောက ကျနော်တို့ မဟာမိတ်တွေ နယ်မြေမှာ လက်နက်တချို့ တွေ့သွားတယ်။ အဲ့ဒီလို တွေ့မလားဆိုတဲ့ ပုံစံနေမှာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ တန်ပြန် ပြောက်ကျား နည်းဗျူဟာထဲက တခုပေါ့။
ပြည်သူလူထုကို ကျနော်တို့ကို မကူညီရဲအောင် မဆက်စပ်ရဲအောင် လူမျိုးရေးအရ မင်းတို့ပုန်ကန်ရင် ဒါမျိုးဖြစ်မယ် ဆိုပြီး လူမျိုးရေးအရ အကြောက်တရားတွေကို ဖန်တီးတာ။ ဒါက Crime Against Humanity ပဲ။ စစ်ရာဇဝတ်မှုပဲ။ သူတို့က မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်ထားပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ပြီ အထိနာပြီဆိုရင် လမ်းမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကို ပစ်သတ်တယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူတယောက်သွားတယ်။ စစ်ဆေးဖို့ ရပ်တန့်တာ မရပ်ဘဲ ပြေးသွားလို့ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ဆိုင်ကယ်မှာ ဝါယာ ကြိုး တချောင်းနဲ့ ပလာယာ ပါလာတယ်ဆိုရင် မိုင်းအတွက် အသုံးပြုတယ်၊ အကြမ်းဖက်သမားဆိုပြီး သတ်လိုက်လို့ သေတဲ့ လူကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်တယ်။ ဒါကတော့ ဆိုင်ကယ်တူးဘောက်စ်မှာ လူတိုင်းမှာ ပလာယာ ပါတယ်။ ဒါက သက်သေခံပစ္စည်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ တဖက်သတ် လူသတ်မှုကျူးလွန်တယ်။ ဒါတွေကို တောက်လျှောက် လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ လူမျိုးရေးအရ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတယ်လို့ လုံးဝ မှတ်ယူတယ်။ ကျနော်တို့က ICJ မှာ အမှုတင်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အတွက် အချက်အလက်တွေ ပေးအပ် သွားမယ် ဆိုတာ ဒါတွေလည်း ပါတယ်။
ပြီးရင် ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေမှာလည်း အထောက်အထားတွေကိုင်ထားတာ ကျနော်တို့မှာ ရှိသင့် သလောက် ရှိတယ်။ အပြစ်ရှိတဲ့ လူကို အပြစ်ရှိကြောင်း အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကျနော်တို့က ရပ်တည်သွားမယ်။
ပြီးရင် ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်လူထုက အနာပဲလားလို့ မေးတဲ့ ကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့က အမှောင်ဆုံးကာလ တခုကို ထိုးဖောက် ဖို့အတွက် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်။ Freedom isn’t Free လွတ်မြောက် မှုဆိုတာ အလကားတော့ မရဘူး။ ကျနော်တို့က ပေးဆပ်မှုတွေ အများကြီးနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲ။ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားဖို့ အတွက် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ နယ်ချဲ့ တပ်ကို တိုက်ထုတ်ရမှာပဲ။
သူတို့ ရခိုင်ပြည်မှာ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ မလုံခြုံမှုတွေ အသက်အန္တရာယ်တွေ တိုင်းရင်းသား တခုနဲ့တခု ကြား မှာ ပြဿနာတွေကို ဖန်တီးနေတာက မြန်မာ စစ်တပ်ပဲ။ သူမရှိရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကျနော်တို့ တာဝန်ယူလို့ ရပြီ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ကျနော်တို့ တိုက်ထုတ်ရမယ်။ ကိုယ်လည်း နာမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါကို ကျနော်တို့ ရင်မဆိုင်လို့ မရဘူး။
မေး။ ။ ရခိုင် တော်လှန်ရေးမှာ Timeline သတ်မှတ်ထားတာ ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် လူထုက ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလ မှန်း မသိတာကို ဆက်ပြီး ဒါတွေကြုံနေရမှာလား။
ဖြေ။ ။ အချိန်ကာလဆိုတာကို ပုံသေပြောဖို့ ဆိုတာက အခြေအနေကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတာက ပိုလက်တွေ့ ဆန် တယ်။ ငါတို့ ၆ လနဲ့ တိုက်ပြီး ပြီးသွားမယ် ဆိုတာက ၆ လပြတ် ကျူရှင် တက်နေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ၁ နှစ် တိုက်လို့ မရရင်တော့ ၂ နှစ်နဲ့ တိုက်ရမှာပေါ့။ ၂ နှစ်နဲ့ မရရင် ၃ နှစ် တိုက်ရမှာပေါ့။ ကျနော် ထင်တာတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲနဲ့ အခုအလားအလာ အတိုင်းဆို ကျနော်တို့ ကြိုးစားမှုက ၂၀၂၅ မတိုင်ခင် တစုံတရာ အပြောင်းအလဲကြီးတခု ကျနော်တို့ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အတွက် သေချာပေါက် ခန့်မှန်းထားတယ်။
မေး ။ ။ တော်လှန်ရေး လုပ်နေကြတဲ့အထဲ ကရင်၊ ကချင် ဆိုရင် ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လိုက် ပြေလည်လိုက် ခဏ အပစ်ရပ်လိုက်နဲ့ နှစ်ကာလတွေ အများကြီး ရှည်ကြာလာတော့ ရခိုင်လည်း ဒီလိုပဲ သွားလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရှိတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်လှန်ရေးက နှစ်ပေါင်း ၇၀၊ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ဆိုပြီး စကားကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပြောပြီး အချိန်ကာလတွေကို ပြဌာန်းနေကြတယ်။ တကယ်ဆိုရင် တော်လှန်ရေး လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေက တကယ် သူတို့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ မတိုက်ပါဘူး။ သူတို့ အလုပ်မကြိုးစားဘူး။ ကျနော် သေချာ ပြောရဲတယ်။ ခဏနေ အပစ်ရပ်လိုက် လူကြီးတွေက ဝိုင်သောက်လိုက်နဲ့ ဇိမ်ခံနေကြတာ များတယ်။ အောက်ခြေ ရဲဘော်တွေပဲ လစာ မရဘူး။ ဒုက္ခတွေ ခံပြီး သူတို့ ဘဝအချိန်တွေကို လောင်ကျွမ်းပေးဆပ် နေရရင်း အဘိုးကြီးတွေ ဖြစ်သွားကြတာ များတယ်။ တကယ် လည်း ဒါမျိုး တိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဟိုဘက်မှာ ၁၅ နှစ်လောက် အပစ်ရပ် ထားတယ်။ ၁၅ နှစ်လောက် လူကြီးတွေ က ချမ်းသာနေတယ်။ ရဲဘော်တွေက အချိန်တွေ လောင်ကျွမ်းပြီး ဘဝတွေ ပျက်စီးသွားတယ်။ တကယ်တိုက်တာမှ မဟုတ်တာ။ ပြီးရင် ကောင်းကောင်းလည်း မတည်ဆောက်ကြဘူး။
တကယ်တည်ဆောက်တဲ့ အုပ်စုတွေဆိုရင် အခုချိန်မှာ ကြည့်ပါလား။ ဝ အဖွဲ့ဆို စစ်မဖြစ်ဘူး။ သူတည်ဆောက်တယ်။ သူ့မှာ တည်ဆောက်ထားတာနဲ့ အင်အားခိုင်မာသွားတော့ သူ့ပြည်သူရဲ့ လုံခြုံရေးကို သူအာမခံပေးထားနိုင်တယ်။ မိုင်းလား အဖွဲ့ကို ကြည့်ပါလား။ သူစစ်မဖြစ်ဘူး။ သူကြိုးစားတယ်။ တည်ဆောက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ခိုင်မာမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ပြည်သူကို အာမခံ ထားနိုင် တယ်။ တခုခုတော့ အကောင်အထည်ကို ပေါ်အောင် ကြိုးစားရမယ်လေ။ တိုက်လို့ မနိုင်ရင်တောင် တည်ဆောက်မှု အင်အား ကြီးထွားလာရမယ်။ ကိုယ်က ပြည်သူကို အကာအကွယ် ပေးထားနိုင်ရမယ်။ ဒါတွေ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က လက်တွေ့ သဘောကိုပဲ ပြောလိုတယ်။ စကားတွေကို ရောယောင်ပြီး ဖြီးပြောပြီး နှစ် ၇၀ တိုက်နေသလို ပြောတာတော့ လက်မခံပါဘူး။
ကျနော်တို့က တိုက်ရင်းနဲ့လည်း တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရက္ခိုင်တပ်က တိုက်နေတော့ အသေအပျောက် တွေ တော့ ရှိတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ တောက်လျှောက်တည်ဆောက်တယ်။ တည်ဆောက် နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကြောင့် ကျနော်တို့မှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိတယ်။ ဒီအတိုင်း တစိုက်မတ်မတ် တည်ဆောက်သွားရင် နောက် ၃ နှစ် ၄ နှစ်ဆိုရင် ကျနော်တို့တော်တော်တော့ တည်ဆောက်နိုင်မှာပဲ။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ် ပြောတဲ့ ၂၀၂၅ ဆိုတာက ဝ တို့ မိုင်းလားတို့လို နေရာတခုလိုမျိုး ဆိုလိုတဲ့ သဘောလား။ ရခိုင်ပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံးကို ပြောနေတာလား။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒါကတော့ နယ်မြေဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ကတော့ ရခိုင် နယ်နိမိတ်မှာ အကုန်လုံးကို ရခိုင်နယ်မြေလို့ သတ် မှတ် တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့စစ်ရေးအရ ဘယ်အတိုင်းအတာထိကို ပြန်လည် ရယူနိုင်မလဲ။ ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကတော့ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ အများကြီး ထည့်သွင်း စဉ်းစားစရာတော့ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဒီထက်တော့ အများကြီး ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။
မေး ။ ။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝ ထဲမှာဆိုရင် ချင်းတွေက AA က ဖိနှိပ်တာ ခံရတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ် ဆိုတာမျိုး ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာတာ ရှိသလို ချင်းနဲ့ ရခိုင်ကြား လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခလို ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး အမြင်စောင်းမှု တွေကလည်း ရှိနေကြတယ်။ ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ရခိုင်နဲ့ ချင်းက အိမ်နီးချင်းဆိုတာထက် အများကြီး နက်ရှိုင်းပါတယ်။ သူများတွေကတော့ အိမ်နီးချင်းလို့ပြောတယ်။ အဲ့ဒီ့ထက် အများကြီး နက်ရှိုင်းပါတယ်။ ချင်းလူမျိုးက ချင်းပြည်နယ်မှာ ၃ သိန်းခွဲလောက် နေတယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လည်း ၁ သိန်းခွဲလောက် နေတယ်။ ရခိုင်ပြည်သား ချင်းလူမျိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ ချင်းလူမျိုး တွေ ဆိုရင် ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်တာ ရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်တာ ရှိတယ်။ ချင်းတော့ ချင်းပဲ မျိုးနွယ်စုတွေ တော့ မတူကြဘူးပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ULA (ရခိုင် အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်) မှာ ရက္ခိတ လမ်းစဉ်ကို ပြဌာန်း ထားတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီဟာက ရခိုင်တခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်မှာ နေထိုင်တဲ့ မတူညီတဲ့ ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ လူမျိုးစု အသီးသီးရဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ကျနော်တို့က လုံးဝ အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ချင်းလူမျိုးတွေဆိုတာ အင်မတန် ရိုးသားပြီးမှ စိတ်နေစိတ်ထား ကောင်းမွန်တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ သစ္စာရှိတယ်။ အကြင်နာတရား ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ထဲမှာ ရခိုင်ပြီးရင် ချင်းလူမျိုးက ဒုတိယ အများဆုံးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ကျနော်တို့ တပ်ထဲမှာ ရှိတယ်။
အခုလည်းပဲ ကြေတော့ မကြေညာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်မှာ နေတဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေက ကျနော်တို့ မှန်းထားတဲ့ အခြေအနေတခုကို ရောက်ရင် သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေက အစ ကျနော်တို့ အများကြီး စဉ်းစားထားတာ ရှိတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပလက်ဝနယ်မြေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ နည်းနည်းတော့ အငြင်းအခုန်နဲ့ ဝေဖန်မှုတွေတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ တော်လှန်ရေးတခုလုပ်ပြီ၊ လက်နက်ကိုင်ပြီးမှ စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျေနပ်တဲ့ လူလည်း ရှိမယ်၊ မကျေနပ်တဲ့ လူလည်း ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်နဲ့ မူဝါဒကတော့ ပလက်ဝ ဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့က လိပ်ပြာသန့်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကျနော်တို့က ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ ရပ်တည် ချက်တွေ ရှိတယ်။ ပလက်ဝ နယ်မြေဆိုတာ သမိုင်းကြောင်းအရ ရခိုင်နဲ့ အမြဲတမ်း ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်နိမိတ် ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ ပြဿနာတွေရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆက်စပ်မှုရိုက်ခတ်မှုတွေတော့ ရှိမှာပေါ့ဗျာ။
ပလက်ဝမှာ နေတဲ့ ခူမီးလူမျိုးတွေ ဆိုရင် ခူမီးက ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ နေတဲ့ ခမီဆိုတာ ရှိတယ်။ အပေါ်ခမီး၊ အောက်ခမီးပေါ့။ ပလက်ဝနယ်ထဲက ခူမီးတွေကျတော့ ခရစ်ယာန် ကိုးကွယ်တာများတော့ သူတို့ရဲ့ အသင်းတော်တွေက ဆက်စပ်မှုနဲ့ ချင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ခူမီးနောက်ကမှ ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ ချင်းဆိုပြီးတော့ ထည့်ထားတာပေါ့ဗျာ။ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ နေတဲ့ ခမီကျတော့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ နီးစပ်ရာနဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကို ပြောကြတာပါ။ တကယ်ဆိုရင် ဒါက ဆက်စပ်နေတဲ့ သွေးချင်းတွေ ပါပဲ။ အခု ခူမီး အုပ်စုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ လူတွေက စစ်သားဟောင်းတွေပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ကို အမြဲတမ်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ဦးစိုးထက်တို့လို လူမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဘာလဲဆိုတာ သူ သိပ် မသိ လောက်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာတခု ဖြစ်လိုက်တိုင်း အဆိုးအမြင်နဲ့ ပြောလေ့ပြောထ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကို အကောင်းပြောပါလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူ လွတ်လပ်စွာ မြင်ပိုင်ခွင့်၊ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လူတွေက စစ်သားဟောင်းတွေပါ။ တဖက်က လည်း NLD ပါတီ ကို ဝင်ထားတယ်။ NLD ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ပလက်ဖောင်းကို သူနင်းပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်က စစ်သား ဟောင်း စိတ်ဓာတ်ပါ။ ဒါတွေနဲ့ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက စစ်သားဟောင်း စိတ် နဲ့ ကျနော်တို့ကို ဆန့်ကျင်နေတော့ တချို့လူတွေက အမြင်ပြောင်းကုန်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး။ ရေရှည် ခရီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရေတိုမှာ အမြင်လွဲမှားမှု ရှိရင်တောင် ရေရှည်ခရီးမှာ ကျနော်တို့က အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေအပေါ် စိတ်သဘောထား၊ အမြင်တွေက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အောက်ခြေက စစ်သားတွေက ရော လက်ခံနားလည်လား။ ဒီလို ကျင့်သုံးလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေမှာလည်း အမြင်မကျယ်တဲ့ ရခိုင်တွေတော့ အများကြီးရှိတယ်။ သို့သော်လည်း အမြင် ကျဉ်းမြောင်း မှုကြောင့် ကျနော်တို့ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ နစ်နာမှုတွေကို အမြဲ ထောက်ပြတယ်။ ကျနော်တို့ ရခိုင်စစ်သားတွေက စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ သူတွေလည်း အနည်းအကျဉ်းတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့်က အမိန့်ကို နာခံတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ။ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒါကို အောင်မြင်သွားမှာပါ။
မေး။ ။ ချင်း လူဦးရေက ရက္ခိုင်စစ်တပ်ထဲမှာ အများကြီးဆိုတာက ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ။ သူတို့ကရော ဘယ်လို ပုံစံတွေနဲ့ ဝင်လာကြတာလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ရက္ခိုင်တပ်ထဲမှာက စုဆောင်းရေး လုပ်တဲ့ပုံစံ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်ချက်နဲ့ တာဝန် သိစိတ်ကိုပဲ အခြေခံပြီး စည်းရုံးရေး လုပ်တာပါ။ ကျနော်တို့ ပြောပြပါတယ်။ ချင်းတွေရော ခူမီးလူမျိုးတွေရော ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောပြတာက ငါတို့ အရင်က ရက္ခိုင်နိုင်ငံတော်ကို အတူတူ တည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ ရက္ခိုင်နိုင်ငံတော်ကို ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က အတူတူ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနိုင်ငံကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အခွင့်အရေးတွေကို ငါတို့ တန်းတူ ရသင့်တယ်။ ဒီအခွင့်အရေး တွေကို တန်းတူရဖို့ ဆိုရင် ငါတို့ တာဝန်တွေကိုလည်း အတူတူယူရမယ်။ အတူတူ ကာကွယ်ပြီး အတူတူနေထိုင်ရအောင် ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို အခြေခံပြီး စည်းရုံးတယ်။ အခုချိန်ဆို သူတို့ တော်တော် ပါပါတယ်။ ရာဂဏန်းအထက်တော့ ရှိတယ်။ ၂၀၀ ကျော် ရှိပါပြီ။ နောက်လည်း အများကြီး ပူးပေါင်း ပါဝင်လာဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်။
မေး။ ။ ချင်းလူဦးရေ ၂၀၀ ကျော်ဆိုတာက တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ မြေပြင်မှာ ရှိနေတာလား။ ဘယ်လို အခြေအနေတွေမှာ ရှိလဲ။ သူတို့ကရော လက်ရှိ ရာထူးအမြင့်ဆုံး ဘယ်လောက်အထိ ရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးတပ် ဆိုတာကတော့ သူပုန်တပ်ဆိုတော့ ရာထူးတွေကို အများကြီး မြှောက်စားတဲ့ ကြယ် ပွင့်တွေနဲ့ တဝင့်ဝင့်တကားကားတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူက တပ်ခွဲကို ဦးဆောင် နိုင်တယ်ဆိုရင် သူ့ကို တပ်ခွဲကို ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတာပေါ့။ တပ်မဟာမှူးတွေ အဆင့်တွေမှာတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါကလည်း သူ့ရဲ့စစ်မှုထမ်း သက်တမ်းရယ် သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ လူမျိုးစု အလိုက် စစ်တပ်မှာ ဘယ်လူမျိုးစုကို ဘယ်ရာ ထူးပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်တောင်တောင် အတွေးအခေါ်တော့ ကျနော်တို့ မလုပ်ဘူး။ တကယ်လို့ ခူမီးလူမျိုးက အရည်အချင်း ရှိတယ်ဆိုရင် သူ့ကို တပ်မမှူးလည်း ပေးရင် ပေးမှာပဲ။ သူတကယ် အရည်အချင်းဖြစ်ရင် သူလည်း ဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာမှာပဲ။ ရခိုင် အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် ကမန် အမျိုးသမီးပေါ့။ သူလည်း အရည်အချင်း ရှိရင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပဲ။ လူတယောက် ချင်း စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ လူမျိုးစု အလိုက်တော့ ရာထူးပေး လို့မဖြစ်ပါဘူး။
မေး။ ။ ဒါဆို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက လူမျိုးစုတွေလည်း ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် မွတ်စလင် အသိုင်းအဝိုင်း တွေရော တပ်ထဲဝင်လာတာ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ သူတို့တော့ ဝင်ချင်တယ်။ ဝင်ချင်လို့ ကမ်းလှမ်းတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ ကျတော့ ကျနော်တို့က အနာဂတ်မှာတော့ ဒါမျိုးခွဲခြားမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလည်း မခွဲခြားဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိတော့ ထားပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ ပြိုင်ဘက် ရန်သူက လက်ညှိုးထိုးပြီး အကြမ်းဖက်သမားတွေကို စုဆောင်းနေပါတယ် ဆိုပြီး အမြတ်ထုတ်ခြင်းကို ခံရမှာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီအပိုင်းကိုတော့ အရမ်းသတိထားတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ သို့သော် လည်း ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ကျနော်တို့က ပြေပြစ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းထားဖို့ သတိထား ပြီး ကြိုးစားတယ်။
မေး။ ။ အခု ဗိုလ်ချုပ်ပြောပုံအရ ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေကလည်း ဒီတော်လှန်ရေး အောင်မြင်ရင် အကျိုးအမြတ် ခံစားရမယ်ဆိုတော့ ဒါကရှင်းပြပါဦး။
ဖြေ။ ။ ဒါက မပေးလို့မရဘူး။ ဒါမျိုး မပေးရင် ကျနော်တို့ ဗမာလို ဖြစ်သွားမှာ။ ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေက မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန် တယ် ဆိုတာကတော့ ပြင်းထန်တယ်လို့တော့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ချစ်တဲ့ စိတ် ကတော့ ရှိတယ်။ မတရားခံနေရတဲ့ အချိန်မှာကျတော့ စုစည်းမှု ခွန်အားက ပိုကောင်းမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေက ရခိုင်ကို ချစ် သလို ချင်းတွေလည်း ချင်းကိုချစ်မှာပဲ။ ကျနော်တို့ ခံစားဖူးတဲ့အချိန်မှာ စာနာပေးလို့ ရတယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေ ကို ကိုယ့်ထက်ငယ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်အသာစီးရတဲ့ အချိန်မှာ ဖိနှိပ်မယ်ဆိုရင် ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သလို ကျနော်တို့လည်း တခါမှ အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တခုက ရခိုင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အစဉ်အလာ တွေနဲ့ အများကြီး ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ရခိုင်ပြည် ဘာ့ကြောင့် ချမ်းသာလဲ၊ တိုးတက်လဲ၊ ရခိုင်တွေ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာနဲ့ တန်းတူ နေနိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဒါဟာ ကျနော်တို့ ရခိုင်ဘုရင်တွေ ရခိုင်ကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အသိအမှတ်ပြု ခဲ့တယ်။ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့က ဒီအစဉ်အလာတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ ဒါကကျနော်တို့ လမ်းကြောင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အစဉ်အလာတွေပါပဲ။
မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့လက လူမှုကွန်ရက်မှာ လူတယောက်ကို သစ္စာဖောက်ဆိုပြီး ဝိုင်းရိုက်သတ်တဲ့ ဖိုင်တခု ပျံ့လာတယ်။ AA စစ်သားတွေလို့ ယူဆရတဲ့ သူတွေက လုပ်တာပေါ့။ ဒါက AA ထဲမှာ ဖြစ်သွားတာလား။ အမျိုးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အတိမ်းစောင်းမခံဘဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကိုင်တွယ်ဖို့ တပ်ထဲမှာ အခွင့်ပေးထားပါသလား။
ဖြေ။ ။ တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာတော့ သစ္စာစောင့်စည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် တိတိကျကျတော့ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ရက်ရက်စက်စက် ဆိုတာမျိုးတော့ ခွင့်မပြုပါဘူး။ အဲ့ဒီ့ ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ သေချာ စုံစမ်းတော့ ကျနော်တို့ တပ်ထဲမှာ ဒီလိုမျိုး ရက်ရက်စက်စက် လူသတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက တခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ၂ ခု၊ ၃ ခုတောင် ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ တပ်မှာက တော်လှန်ရေးတပ် ဆိုတော့ဗျာ။ ကျနော် ဆင်ခြေပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်လူရွယ်တွေများတယ်။ တချို့ကျတော့ တိုက်ပွဲတွေ အရမ်း ပြင်းထန်နေတဲ့ ကာလတွေမှာ သွေးဆူတာတွေ ရှိတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လူကြီးတွေနဲ့ ဝေးတော့ ဒါမျိုး ဖြစ်စဉ် ၁ ခု ၂ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိတော့ ဒီမှာ ပါဝင်တဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ အရေးယူထားတယ်။ အကုန်လုံး ရာထူးတွေ ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ခြေကျင်းတွေခတ်ပြီး အရေးယူ ထား တာပေါ့။ တချို့ကျတော့ ကျနော်တို့ သေဒဏ် ပေးပစ်လိုက်တာ ရှိတယ်။ ဒါကတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါမျိုး လူသတ်မှု ဖြစ်သွား တာပေါ့ဗျာ။ ရက်ရက်စက်စက်ပေါ့။ ဒါမျိုးတွေကို ကျနော်တို့ ခွင့်မပြုပါဘူး။ ကျနော်တို့ အရေးယူပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ ကြောင့် ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ တချို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါကို တကြိမ် ဖမ်းထားလိုက် တယ် ပေါ့။
နောက်တကြိမ်ဆိုရင် သူက တယောက်တည်း ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတာ မဟုတ်ဘဲ သူများကိုပါ စည်းရုံးတာပေါ့နော်။ လိုက်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေကြားမှာ ဒီကောင် တကယ် သစ္စာဖောက်တာပဲ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ သူတို့ မထိန်းမသိမ်းနိုင် အဲ့ဒီလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။
မေး။ ။ သေဆုံးသွားတဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ပြန် အကြောင်းကြားပေးတာရော ရှိလား။
ဖြေ။ ။ ဒီအချိန် ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးကာလမှာ မဖြစ်သင့်တာကို မဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းတာကတော့ မှန်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဒီ့ထက်ပိုပြီးမှ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ကို ရင်ဆိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာ တချို့ပြဿနာကို အလွန်တရာတော့ ချဲ့ကားမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အပြစ်ရှိတဲ့ လူကိုတော့ အပြစ်ယူမယ်။ မိသားစုအနေနဲ့ သိပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုရင် မိသားစုကို သိပိုင်ခွင့် ပေးတယ်။ နောက်တခါ မဖြစ်ဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ ထိန်းသိမ်းတယ်။ တကယ်လို့ လိုအပ်ခဲ့ရင်တောင် အဲ့ဒီလူကို မိသားစုရှေ့မှာတောင် သတ်ပစ်လိုက်ရတာလည်း ရှိတယ်။ ဒီမှာ မင်းတို့ မိသားစုက ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုပြီး သတ်ပစ်လိုက် တာထက် ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ပြစ်ဒဏ် ဥပမာ မုဒိမ်းမှုတခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူက သာမန် ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ခွင့်လွှတ် လို့ ရပေမယ့် ရွာသားတွေက ခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုရင် ရွာသားတွေ ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ ငါတို့တာဝန် ခံတယ်။ ငါတို့ ရဲဘော်မို့ဆိုပြီး မဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီး အရေးယူပြရပါတယ်။ ဒါကတော့ ရှိပါတယ်။ တော်လှန်ရေး လောကမှာ ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ပါ။ ကျနော်တို့ ဒါမျိုးတွေကို အလွတ်မပေးပါဘူး။ အရေးယူပါတယ်။ လူသတ်ဝါဒတွေကို ကျနော်တို့ ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ ဒီ ၂ မှု၊ ၃ မှု ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက အကုန်လုံး ရခိုင်က ရှေ့တန်းမှာ ဖြစ်တာလား။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး နောက်မှာ ရော ဒါမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်တွေ ထပ်ချတာ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ဖြစ်တာကလည်း တပ်မှူးငယ်က ပြစ်ဒဏ်ပေးတာတွေကို ဗီဒီယို ရိုက်တယ်ဆိုတာ အစဉ်အလာ မရှိပါ ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အုပ်စုကျတော့ ဗီဒီယိုရိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့ တပ်မှူးငယ်က ရန်သူလက်ထဲကို ရောက်သွားတယ်။ တပ်မ ၂၂၊ ၂၀၅ အဖွဲ့က ဖမ်းသွားတယ်။ အဖမ်းခံရတော့ သူ့ရဲ့ဖုန်းမှာ ပါသွားတယ်။ အဲ့ဒါကို မြန်မာ ထောက်လှမ်းရေးတွေက အချိန် တခု ကို ရောက်ရင် အဲ့ဒါကို စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး လုပ်တာပေါ့ဗျာ။ သဘောက သူ့ကို ကျနော်တို့က အောင်ပွဲခံနေတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ထွက်လာရင် အဲ့ဒါတွေကို အာရုံပြောင်းဖို့ အတွက် အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ ထုတ်ပြီးမှ လုပ်တတ်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကတော့ နဂိုကတည်းက ရှိပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ ထပ်လောင်းပြီး မဖြစ်ဖို့တော့ ပြန်လည် သတိပေးရတာတော့ ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ပဋိပက္ခတွေ တောက်လျှောက် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်မှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတာတွေ နောက်ပြီး လွှတ်တော် အမတ် ဦးဝှေ့တင်းကို ဖမ်းထားတာမျိုးနဲ့ ဖမ်းမိတဲ့ စစ်သားတွေကို လူလဲမယ် ဆိုတာတွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်လို့ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပြောတာရှိတယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသား တပ်တွေမှာ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေ မတွေ့ရဘူး။ ဒီအပေါ် ရော ဘယ်လို တုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဒေသဆိုတော့ အခြေအနေကတော့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နာမည်ကို အသုံးချပြီး ဓားပြ တိုက်တာလည်း ရှိတယ်။ ငွေကြေး လိမ်လည် တောင်းဆိုကြတဲ့ လိမ်လည်မှုတွေလည်း ရှိတယ်။ ရန်သူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျနော်တို့ကို ပုံမှားရိုက်ပြီးမှ လူထုထဲမှာ ကြောက်လန့်အောင် အယုံအကြည်မရှိအောင် ရွံရှာသွားအောင် ပုံမှားရိုက်တာ တွေ လည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ရခိုင်ပြည်မှာ မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေလည်း ရှိတယ်။ မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းတွေက တယောက်နဲ့ တယောက် ငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့ အခါမှာ ကျနော်တို့ နာမည်ကို အသုံးချတာတို့ နယ်စပ်ဘက်မှာ မွတ်စလင်တွေ အချင်း ချင်းကြားမှာ ပြဿနာဖြစ်ရင်တောင် ကျနော်တို့ပဲ လုပ်သွားသလို ကြုံနေရတာ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ကျနော်တို့က အရမ်းသတိထား ပြီးမှ ကိုင်တွယ် ပြောဆိုရပါတယ်။ ဒါတွေက ရှောင်လွှဲလို့ မရဘဲရှိနေမှာပါ။ သို့သော်လည်း ပြောတိုင်းလည်း မယုံနဲ့ပေါ့ဗျာ။
ကိုယ့်ဘာသာ ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏ကတော့ ပညာရှိမျက်စိနဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တချက် ကတော့ ရန်သူရဲ့ ဓားစာခံ၊ သုံ့ပန်းဖမ်းတာတို့က တခါတလေ သူတို့က ဝါဒဖြန့်တယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီးတယ် ဆိုပြီး တော့ ပေါ့။ ကျနော်တို့ ဖမ်းတဲ့အထဲမှာ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေကိုပဲ ထိန်းသိမ်းတယ်။ သာမန် အစိုးရ ဝန်ထမ်းဆို ကျနော် တို့ လွှတ်ပေးတယ်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်စပ်ရင်တော့ ကျနော်တို့ မလွှတ်ပေးဘူး။ သူတို့ဘက် မှာလည်း သူတို့ ဥပဒေဆိုတာ ရှိသလို ကျနော်တို့မှာလည်း တော်လှန်ရေး စည်းကမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ရခိုင်ပြည်ကို လက်နက်ကိုင်ပြီး ဝင်လာတဲ့ ဘယ်ဗမာစစ်သားကိုမဆို ကျနော်တို့က ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လိုရင် လိုသလို အရေးယူပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ကျနော် တို့မှာ စည်းကမ်းရှိတယ်။ ဥပဒေရှိတယ်။
တိုက်ခိုက်ရေး ရဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ကျနော်တို့ဖမ်းဆီးမှာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့က အစိုးရဝန်ထမ်းကို ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုပြီး ဖွပြီး စကားကို ဝါဒဖြန့်တာပါ။ ကျနော်တို့မှာ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ နောက် ထပ် လည်း စာရင်းတွေ ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီက အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျနော် တို့လည်း အဲ့ဒီ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်တွေကို လွှတ်ပေးမယ်။ ဒါက အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ရယ်လို့ တော့ ပြောလို့ မရဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ကျနော်တို့လူတွေကို မတရား ဖမ်းထားတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ခင်ဗျားတို့ လက်နက် ကိုင် တပ်ဖွဲ့က လူတွေကို ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ အလဲအလှယ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အတွက် ကောင်းတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ပြီးရင် သူတို့ရဲ့လူတွေကို သူဘယ်လောက် တန်ဖိုးထားသလဲပေါ့။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း လဲလှယ် နေကြတာပဲ။ အစ္စရေးမှာ လည်း လဲတယ်။ အမေရိကန်မှာလည်း လဲတယ်။ ကမ္ဘာ့ အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံတွေတောင် လုပ်နေတာပဲ။ ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဦးဝှေ့တင်းကိစ္စကတော့ ချင်းဖြစ်လို့ ခူမီးဖြစ်လို့ အမျိုးမျိုးတော့ ပြောကြတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ရက္ခိုင်တပ်တော် အနေနဲ့ ရန်သူ နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့သူ ရှိလာရင် ကျနော်တို့က ဘယ်လူမျိုးပါ။ ဒါက ဘယ်လူမျိုးစုပါ ဆိုပြီး ခွဲခြားနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်သူနဲ့ ပူးပေါင်းရင် ရန်သူ့အားပေး၊ ရန်သူ့လူပါ ဆိုပြီး ထိန်းသိမ်းရမှာပဲ။ ကိုဝှေ့တင်းကို ကျနော်တို့ မထိန်းသိမ်းခင်မှာ သူတို့ အုပ်စု တွေ ဘာလုပ်လဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ သေချာ သိတယ်။ သူ့ရဲ့ ထောက်လှမ်းပြီး မဟုတ်ကဟုတ်က တိုင်လိုက်လို့ ရှင်လက်ဝ ရွာသားတွေ ၂၀ ကျော်လောက် အခုထက်ထိ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်ထဲ ရောက်သွားတာ အခုထက်ထိပဲ။ ဒါသာမန် ရွာသား တွေပါ။ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ သတင်းတွေကို တပ်မကို ပို့တာတို့ ကျနော်တို့မှာ သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေ ဆိုရှယ် မီဒီယာ အကောင့် တွေထဲကနေ ကျနော်တို့ အကုန်လုံး Screen Shot ယူထားတာ ရှိတယ်။
အခု သူ့ရဲ့ facebook အကောင့်ကို လော့ချလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က သူ့ရဲ့ အကောင့်ထဲက အချက်အလက်တွေ သူတို့ရဲ့Group Chat တွေကို ကျနော်တို့ အကုန်လုံး မှတ်တမ်း ယူထားလိုက်ပြီးပြီ။ အဲ့ဒီ့မှာ သူတို့ ဘယ်လောက်ထိတောင် ပြောလဲ ဆိုရင် လူမျိုးရေးအရ သူတို့က ရခိုင်တွေကို မရှုစိမ့်ဘူးဗျ သူတို့ အုပ်စုတွေက။ ကျနော်တို့ သေချာကြည့်လိုက် တော့ ဘယ်လောက်ထိလဲ ဆိုရင် လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာ ရခိုင်လူမျိုး တော်တော်များတယ်။ ပလက်ဝမှာရောပေါ့။ ချင်းလွှတ်တော်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဝန်ကြီး ပေါ်လာမှာကိုတောင် သူတို့ ကြိုပြီး မလိုလားတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုတောင် တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုဟာတွေ ပေါ့။
မေး။ ။ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေ အချက်အလက်တွေ ရတယ်ဆိုတာက ဖမ်းပြီးမှ ဖုန်းကနေ ရတာလား။ မဖမ်းခင် ကတည်းက Hack လုပ်ပြီး ရတာလား။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒါတွေကျတော့ ကျနော်တို့ လောလောဆယ် မဖော်ပြသေးပါဘူး။ နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ။
မေး။ ။ ဦးဝှေ့တင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ်မေးချင်တာက AA အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက အစိုးရအဖွဲ့ဝင်နဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေကိုရော စောင့်ကြည့်တာ ရှိလား။ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ စောင့်ကြည့်လဲ။
ဖြေ။ ။ စောင့်ကြည့်တာပေါ့။ သေချာတာပေါ့။ စောင့်ကြည့်တယ်။ (ဦးဝှေ့တင်းလို ကိစ္စမျိုးရှိလာရင်တော့) သူ့ကို ဘယ် အတိုင်းအတာ အထိ ကိုင်တွယ်သင့်လဲ ဆိုတာကို မူတည်ပြီးမှ သေသေချာချာတော့ ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့။ စောင့်ကြည့်တယ် ဆိုတာကတော့ လူတယောက် အသက်ကို မသေသင့်တာကိုတော့ မသေစေရပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီလူ တယောက်က ကျနော်တို့ ကို ဘယ်လောက်အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်လဲပေါ့။ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်တာပေါ့ဗျာ။ ပြီးမှ လုပ်သင့်တဲ့ အတိုင်းအတာကို လုပ်ရမှာ ပဲ။ လူတယောက်ကို အလိုလိုနေရင်း သတ်ဖြတ်တာကတော့ လူသတ်ဝါဒပါ။
မေး။ ။ AA က အခုလည်း ဘူးသီးတောင် NLD ဥက္ကဋ္ဌကို ထပ်ဖမ်းတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဖမ်းဆီးတာက ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေအရ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေး ယူဆချက်တွေအပေါ် လုပ်ဆောင်ကြသူတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာပါလို့ ဝေဖန်မှုပြောဆိုမှုတွေကို ဘယ်လို ပြောချင်ပါလဲ။ နောက် AA ကို လွတ်လပ်စွာ မပြောရဲမဆိုရဲ မဝေဖန်ရဲ ဖြစ်လာရင် ဒါက ကောင်းတဲ့ အလားအလာ ဖြစ်ပါ့မလား။
ဖြေ။ ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွန်းအကြောင်းကို ပြောရင်တော့ ပြောလို့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်သူတွေတောင် စစ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်း များစွာကို နိုင်ငံတော်အစိုးရဆီမှာ ကျူးလွန်ခံ နေရတယ်။ တကယ့် ရခိုင်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နယ်မြေမှာ သူများကို ကျူးလွန်တုန်းကတော့ ကျူးလွန်ပြီး ကိုယ်ခံရတဲ့ အချိန်မှာမှ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်း ဆိုတာတွေကို လျှောက်ပြော တာက တော့ လက်တွေ့မဆန်ပါဘူး။ ဥပမာ မြန်မာစစ်တပ် ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီမိုကရေစီခေတ် အကြောင်းတွေကို တဖွဖွ ပြောတာ ပေါ့ဗျာ။ တကယ်ကျ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာမဲ တပြားမှ မရဘဲ မျက်နှာပြောင်တိုက် ဝင်ထိုင်ရဲတဲ့ လူလည်း ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း တွေ လျှောက်ပြောတာပဲ။ ဒါက အပြောမှာပဲ ရှိတယ်။ အလုပ်မှာ မရှိပါဘူး။
အခုက ရခိုင်ပြည်လိုမျိုး ပဋိပက္ခတွေ တိုက်ပွဲတွေ အများကြီးဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်သူတွေ တရက် တရက်ကို ဘယ်လောက်သေလဲ။ ကလေးတွေ အဘွားကြီးတွေ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ။ အဲ့ဒီလောက် စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ လူထု တရပ် လုံး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ နယ်မြေမှာလာပြီး စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ပြစ်မှု ကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေကို ထောက်ခံ ပွဲလုပ်တယ် ဆိုတာ တကယ့် မျက်နှာပြောင် တိုက်ပြီး တကယ့်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ ဒါကို ကျနော်တို့က သဘော မတူဘူး။ ပြီးရင် သူတို့ အဲ့ဒီ့နယ်မြေမှာ တခုခု လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းသင့်တယ်။ နားလည်မှုလည်း ယူသင့် တယ်။ သူက ဘာမှ ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ သူ့ကို မေးမြန်း စရာတွေလည်း ရှိတယ်။
ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံနှုန်းဆိုတာ အပြောမှာပဲ နားထောင်ကောင်းရုံ ရှိတယ်။ တကယ်ဆို ပြည်သူတရပ်လုံးက တကမ္ဘာလုံးက အပြောင်းအလဲဆိုတာကို Transition ကို လှည့်စားခံနေရတာ။ ဒါ မလှိမ့်တပတ် ဒီမိုကရေစီ၊ အာဏာရှင် တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးတွေနဲ့ ကြိုးဆွဲခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီ ဒီမိုကရေစီကို ကျနော်တို့ အယုံအကြည် လည်း မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ တပ်မတော်သားတွေကို ဖမ်းထားတာကလည်း လူလဲမယ်ပြောထားတော့ တပ်မတော်ဘက်ကတော့ မလဲဘူးလေ။ မလဲရင် သူတို့က မလွှတ်တော့ဘူးလား။ တဆက်တည်း မေးချင်တာက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဆွေမျိုးဖြစ်သူတွေလည်း ရန်ကုန်က ထောင်ထဲမှာနေပြီး တရားစွဲဆို ခံထားရတယ်။ သူတို့ကိုရော လူလဲဖို့ ကမ်းလှမ်းချင်တာ ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စမှာကတော့ ကျနော့်ရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ဖမ်းဆီးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်က တော်လှန်ရေးကို ခေါင်းဆောင်နေရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို အသားပေးပြီး ငါ့ညီမကို လွှတ်စေ၊ ငါ့ ညီကို လွှတ်စေ ဆိုပြီး သွားတောင်းဆိုမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုလည်း ကျနော်နဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဖမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့က ရခိုင် ပြည်သူ တွေ ဖြစ်တယ်။ တခြားရွာမှာ အဖမ်းခံထားရသူတွေကိုလည်း ကျနော့်ညီအစ်ကိုတွေ သားသမီးတွေလို တန်ဖိုးထားတယ်။ တရား မျှတမှုကို တောင်းဆိုရင် အကုန်လုံးအတွက် တောင်းဆိုသွားမယ်။ ငါ့ညီ ငါ့ညီမအတွက် ဆိုပြီး တကူး တကတော့ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးရင် သူတို့ဘက်က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အရာရှိ စစ်သည်တွေ ရဲဘော်တွေ အကုန်လုံးကိုတော့ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သမျှတော့ ရှိတာနဲ့ မျှပြီး ကျွေးမွေးမှာပဲ။ ဒါကတော့ တော်လှန်ရေးတခုရဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်မှာပါ။ တတ်နိုင်သလောက်တော့ စောင့်ရှောက်မှာပါ။
ကျနော်ထင်တာကတော့ သူတို့ဘက်က လုံးဝ မလဲဘူးလို့ ပြောတာက သူတို့ အရှက်ကွဲတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ အရမ်း အထင် သေးထားတဲ့ ရခိုင်သူပုန်ဆီမှာ လက်အုပ်ချီပြီး အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ သူတို့ အရှက်ကွဲတာပေါ့။ ဒါကတော့ ရှက်ပြီးမှ ပြောလိုက်တဲ့ စကားလို့ ယူဆပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ သူတို့ ရဲဘော်တွေ အတွက် မေတ္တာကရုဏာတော့ ရှိမှာပါ။ ဒီလောက် မေတ္တာတရား မရှိဘူးဆိုလည်း သူ့ရဲဘော်တွေရဲ့ကံတရားပေါ့။ သူတို့ကို ကျနော်တို့ ဆက်ထိန်းသိမ်းထားမှာပါ။ သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားလို့ ကျနော်တို့ အရှုံးမရှိပါဘူး။ သဘောက သူတို့ကို ကျနော်တို့ ထိန်းသိမ်းထားတယ် ဆိုရင် သူတို့က စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့အထဲမှာ ပါတယ်။ သူတို့ဆီက လူသက်သေတွေ ရတယ်။ ဘယ်ရွာမှာ ဘယ်သူက မီးရှို့ခဲ့ တယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လို အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဒီလူတွေကို သက်သေခံခိုင်းလို့ ရတယ်။ သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားလို့ အကျိုး မယုတ်ဘူး။
သူတို့က ငါတို့ကို ငါတို့လူကြီးတွေက ပစ်ပယ်လိုက်ပြီလို့ အမှန်တကယ် ခံစားရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကို ဘာခိုင်းခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြောလာရင် ကျနော်တို့က သူတို့ကို တရားစွဲဖို့ သက်သေရသွားပြီ။ ကျနော်တို့ဘက်က အရှုံးမရှိပါဘူး။
မေး။ ။ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ စစ်သားတွေကို လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ သိရဖို့ မေးတဲ့အခါ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ စစ်ဆေးလဲ။ တပ်တွေထဲမှာ စစ်ဆေးသလိုပဲ လိုချင်တဲ့ အချက်အလက် မရရအောင် နည်းမျိုးစုံ သုံးသလား။
ဖြေ။ ။ သူတို့ စစ်ဆေးတာနဲ့ကျနော်တို့ စစ်ဆေးတာ မတူပါဘူး။ ဗမာထောက်လှမ်းရေးတွေက ကျနော်တို့ လူတွေကို ဖမ်းမိပြီ ဆိုရင် အကြောင်းစုံ ကွင်းဆက်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုတော့ အရမ်းလူမဆန်အောင် တကယ့်လောကမှာ အရက်စက်ဆုံး ဂျပန် ကင်ပေတိုင်တွေလို စစ်ဆေးတာပေါ့။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဖမ်းမိရင်တော့ မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေက ရှင်းပါတယ်။ သူဘယ်တပ်ကလဲ။ ဘယ်လို သင်တန်းတွေ တက်လဲ။ ဘယ်လို လက်နက်ခဲယမ်းတွေလဲ။ နောက်တန်း ဖွဲ့စည်းပုံတို့ သူ့ရဲ့ ဆရာသမားတွေပေါ့။ အကြောင်းအရာတွေပေါ့။ တခြားတော့ရှိတော့ ရှိတာပေါ့။ နည်းပညာ ပိုင်းတွေ ဘာတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် စစ်ဆေးတဲ့ ပုံချင်း မတူပါဘူး။
မေး။ ။ ထပ်မေးချင်တာက AA စစ်သားတွေကို စစ်သင်တန်းပေးတဲ့ နေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် အနောက် နိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းတွေ တခုခုက ကူညီတာ ရှိသလား။ သူတို့တွေဆီက သင်တန်းတွေ၊ လေ့ကျင့်ပေးထားတာမျိုးတွေ ရထားတာ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ပညာကတော့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျနော်တို့ တပ်တွေကို အရည်အချင်း မြှင့်တင်ဖို့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းဖို့ နည်းပညာတွေမြင့်လာဖို့ တောက်လျှောက် မနားမနေ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျနော်တို့ တပ်ထဲမှာ လေ့ကျင့်ရေးဌာနတွေ ဆိုရင် နားချိန်ကို မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံအစိုးရတွေ အနေနဲ့ကတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘက်က မပေးရင်လည်း ဒီနည်းပညာတွေ နည်းစနစ်တွေကို ရဖို့အတွက်ကတော့ ကျနော်တို့ အလုပ်ပဲလေ။ ဒါဟာ အကုန် အကျ ကြီးရင်တောင် ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နည်းပညာတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ၊ နည်းစနစ်တွေကို တော့ အမြဲတမ်း ရရှိအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ရသင့်သလောက်လည်း ရပါတယ်။ ။
ဒုတိယပိုင်း ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်။
17 December 2019AA စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျ ထှနျးမွတျနိုငျ / ဧရာဝတီ Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ရခိုငျပွညျနယျတှငျးမှာဆိုရငျ တပျမတျောနဲ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) တို့ကွား တိုကျပှဲတှေ မရပျမနားဘဲ ဆကျတိုကျ ဖွဈပှား နတော တနှဈကြျောပါပွီ။ အရပျသားတှေ ထိခိုကျသဆေုံးမှုနှုနျးကလညျး ပို မွငျ့တကျလာပါတယျ။
လာမယျ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး ရခိုငျပွညျနယျထဲက ပဋိပက်ခတှရေဲ့ အလားအလာ၊ ပဋိပက်ခတှေ ကွားထဲက ခငျြးလူမြိုး တှေ နဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ စီမံကိနျးတှအေပျေါ AA ရဲ့သဘောထား၊ ၂၀၂၀ မှာ ပျေါပေါကျလာမယျ့ ငွိမျးခမျြးရေး အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီ အကွီးတနျး သတငျးထောကျ နနျးလှငျနှငျးပှငျ့က AA စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျ ထှနျးမွတျနိုငျကို ဆကျသှယျ မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး။ ။ ရခိုငျမှာ တိုကျပှဲတှကေ အခွအေနေ ဘယျလိုလဲ။
ဖွေ။ ။ ဟုတျပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ ၈ ရကျက တိုကျပှဲတျောတျောလေး ပွငျးထနျပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ ၇ ရကျ တိုကျပှဲကလညျး ပွငျးထနျပါတယျ။ ရသတေ့ောငျဘကျမှာရော မွပေုံမွို့နယျဘကျမှာရော တျောတျောပွငျးထနျတယျ။ ရသတေ့ောငျ ဘကျမှာ က တပျမ ၂၂ နဲ့ဖွဈတာပေါ့။ အဓိကဖွဈတဲ့ တပျရငျးက ၂၀၈၊ တျောတျောလေးအထိနာပွီးမှ သူပိတျမိနတော။ သူ့ကို ရဟတျယာဉျ တှနေဲ့ လာပဈပွီးမှ မီးခိုးဗုံးတှခေပြွီးမှ လာကယျတာပေါ့ဗြာ။ ထှကျပွေးလို့ရအောငျ။ သူတို့ လူနာတှေ အလောငျး တှကေို ဆှဲထုတျပွီး ညပိုငျးအမှောငျထဲမှာ အမှောငျကို အကာအကှယျနဲ့ ထှကျပွေးပွီးမှ လှတျသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ သူ့ရဲ့ပစ်စညျးတှေ တျောတျောမြားမြားကိုတော့ သိမျးဆညျး ရလိုကျတယျ။ ခဲယမျးတှေ အပါအဝငျပေါ့။ အဲ့ဒါတော့ ရသတေ့ောငျ မှာပါ။ ပွီးရငျ မွပေုံနဲ့ အမျးကွားမှာ ဒီဇငျဘာ ၅ ရကျ၊ ၆ ရကျ နတှေ့မှော စကခ ၅ ရယျ ကြောကျဖွူ က တပျရငျး တရငျး ပါတယျ။ အဲ့ဒီ့ ၂ ရငျးပေါငျး။ သူတို့ဆီကလညျး ပစ်စညျးတှေ တျောတျောမြားမြား ကနြျောတို့ သိမျးဆညျး ထားတယျ။ တိုကျပှဲမှာ သူတို့လူတှေ ကှဲသှားတယျ ထငျတယျ။ ၃ဖှဲ့ ၄ ဖှဲ့လောကျ၊ သူတို့က ရဟတျယာဉျတှနေဲ့ လိုကျရှာပွီး ပဈကူတှေ ပေးတာ။
မေး။ ။ တပျမတျောနဲ့ AA ကွား အပဈရပျဖို့ စာခြုပျအတှကျ တဖကျမှာ ညှိနှိုငျးနတောလညျး ရှိနပွေီး ရခိုငျမှာ တိုကျပှဲ မရပျ ဘူး။ စဈရှိနျမလြှော့ခနြိုငျတာ အဓိက အကွောငျးရငျးက ဘာလဲ။
ဖွေ။ ။ မွနျမာ့တပျမတျောဘကျက သူတို့ရဲ့ မာနတှေ Attitude တှပေျေါမှာ မူတညျမယျ ထငျတယျ။ သူကတော့ ပွောနေ တာပဲသူတို့ တိုကျခငျြရငျ ဘယျဟာမဆို တိုကျလို့ ရတယျဆိုပွီး စဈရေးအရ သူတို့ ဘကျက အသာစီးခညျြးပဲ သမိုငျးမှာ ရှိတယျ ဆိုပွီးမှလေ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူလုပျရငျ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ အငျအား သုံးတဲ့ အခွခေံစိတျနစေိတျထားနဲ့ပဲ ဆိုငျမယျ ထငျ တယျ။ နောကျမဆုတျဘူး။ ဘာပဲဖွဈဖွဈပေါ့။ ပွီးတော့ သူတို့ ထငျတာက အနောကျဘကျ စဈမကျြနှာ ဆိုတော့ ကနြျောတို့ ရက်ခိုငျတပျ အနနေဲ့ ဘေးမှာ မဟာမိတျတှမေရှိဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ခြောငျပိတျမိပွီး အပွတျအသတျခမြှေုနျးမယျ ဆိုတဲ့ ရညျမှနျး ခကျြတှေ ရှိမှာပေါ့။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး သူက စဈရေးအရှိနျကို နညျးနညျးမှ အလြှော့ မပေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောမြိုးတှပေါ။
မေး။ ။ AA က ကခငျြ၊ ကိုးကနျ့ စဈမွပွေငျတှမှောလညျး အတှအေ့ကွုံရှိတော့ အခု ရခိုငျမှာ ကွုံရတဲ့ တိုကျပှဲတှနေဲ့ အရငျ ကွုံဖူးတဲ့ အခွအေနေ ဘာတှကှောခွားလဲ။ တပျမတျော ဘကျက တိုကျခိုကျရေး ဗြူဟာတှေ လကျနကျတှေ ကှာခွား လာ သလား။
ဖွေ။ ။ သူကတော့ အဓိက အဆငျ့မွငျ့လကျနကျတှေ ဆိုတာထကျ Firepower ကို အဓိက သုံးတယျ။ အခုနောကျပိုငျး သူကိုယျတိုငျလညျး ထုတျတယျ ဆိုတော့ Firepowerကို အဓိက သုံးတယျ။ သူ့ရဲ့ တိုကျခိုကျရေး နညျးဗြူဟာကတော့ ကနြျောတို့က ရခိုငျပွညျမှာဆိုတော့ ကိုယျတိုကျခငျြတဲ့ ပုံစံကို ဖျောပွီးတော့ ပွနျတုံ့ပွနျတာပေါ့။ ရရှေညျမှာတော့ ကနြျောတို့ ဘကျက Morale ပိုငျးမှာ အသာစီးရပါတယျ။ သူတို့ဘကျမှာကတြော့ အထိအခိုကျ အကအြဆုံး မြားလာတာတို့။ သူ စိတျကွိုကျ တိုကျခငျြတဲ့ပုံစံမြိုး သူပုံသှငျးလို့ မရတဲ့အခြိနျမှာ လကျနကျကွီးနဲ့ လကွေောငျးပဈကူပဲ အဓိက မှီခိုရတယျ။ အဲ့ဒါတှေ မလာရငျ သူ့စဈသားက ထှကျပွေးပွီ။ အဲ့ဒီလို ထှကျပွေးလို့လညျး ကနြျောတို့ ပစ်စညျးတှေ အမြားကွီး သိမျးလို့ မိတာပဲ။ နတေို့ငျးပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ Morale ပိုငျးတော့ တျောတျောရှုံးတယျ။ သူတို့က Firepower နဲ့ပဲ လိုကျထိနျးနိုငျတယျ။ သူတို့ဆီက သိမျးလို့ရမိတဲ့ ပစ်စညျးတှမှော ဂါထာတှေ အငျးအိုငျတှပေဲ အမြားကွီး သိမျးဆညျး မိတယျ။
မေး။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈလညျး ကုနျပွီဆိုတော့ ဒီတနှဈလုံးမှာ တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနဲ့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ တို့ရဲ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး အပျေါ အာရုံစိုကျမှု၊ ဆောငျရှကျမှုကိုရော ဘယျလိုမြား သုံးသပျခကျြ ရှိပါသလဲ။
ဖွေ။ ။ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျကတော့ သူတို့ အခု လကျရှိလုပျနတေဲ့ NCA လုပျငနျးစဉျက တျောတျောလေး ရုပျနဲ့ နာမျနဲ့ တောငျ ဒွပျကှဲနပွေီ ထငျတယျ။ ယုံကွညျမှုတှလေညျး မရှိဘူး။ ပွီးရငျ ကတိကဝတျမှာပါတဲ့ လကျမှတျ ထိုးထားတဲ့အခကျြ အလကျတှကေိုလညျး တာဝနျခံပွီးမှ အကောငျအထညျဖျောမှုတှေ မရှိလတေော့ လြှောကျတော့ လြှောကျနတေယျ။ ခရီးက မရောကျဘူး လို့မွငျတယျ။ နောကျတခကျြကတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဦးမငျးအောငျလှိုငျ ကွားမှာ သူတို့နှဈယောကျက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မအောငျမွငျဘူးလို့ ပွောလို့ရတယျ။ ကနြျော စဉျးစားမိတာက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အစိုးရ ဦးဆောငျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ငွိမျးခမျြးရေး အောငျမွငျသှားတယျ ဆိုတဲ့ အမှတျကို စဈတပျက မပေးခငျြဘူး ထငျတယျ။ သူ့ရဲ့ ၂၀၂၀ နိုငျငံရေး ပွိုငျပှဲအတှကျ တယောကျကို တယောကျ ခွလေကျ အကာအစီး ရသှားမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ တိုးတကျဖွဈပျေါမှုတှကေ ရသငျ့သလောကျ မရဘူးလို့ မွငျတှရေ့တယျ။
မေး။ ။ Bilateral (ပဏာမ အပဈရပျရေး) ဆှေးနှေးမှုတှကေရော စားပှဲဝိုငျးမှာ အလုပျတကယျ ဖွဈလား။
ဖွေ။ ။ Bilateral ကိစ်စကတော့ ကနြျောတို့ ၄ ဖှဲ့ပေါ့။ ပွီးရငျ FPNCC မဟာမိတျတှေ ကွားမှာ ရှကေို့ ရောကျစခေငျြတယျ။ သို့သျောလညျး တဖကျနဲ့ တဖကျကွားမှာ သံသယတှေ အလြှော့ မပေးလိုမှုတှကေ မြားတယျ။ ဟိုဘကျကလညျး သူတို့ တပျမတျောမူ ၆ ခကျြတို့ လာညှိတဲ့ လူကလညျး အပျေါကို ပွနျတငျပွလိုကျမယျ ဆိုပွီး ပွနျသှားတာ မြားတယျ။ အစညျး အဝေး ရှိတယျဆိုရငျ သှားလိုကျလေ၊ အစညျးအဝေးပွီးရငျ ဘာမှ တိုးတကျလာမှာ မဟုတျဘူး ဆိုတဲ့ သဘောမြိုးတှေ ဖွဈကုနျတာပေါ့။
ကနြျောတို့ဘကျက အဆိုပွုလှာတခု ရေးထားတယျ။ ကွိုတငျ ကနျ့သတျခကျြတှနေဲ့ အတားအဆီးမဖွဈအောငျတော့ ရှကေို့ ရောကျနိုငျအောငျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွငျဆငျထားတဲ့ အခကျြတှေ ရှိပါတယျ။ သူတို့ဘကျက လကျမခံနိုငျတဲ့ အခကျြ တှေ ပါကောငျး ပါမှာပေါ့။ သို့သျောလညျး နောကျဆံ တငျးပွီးတော့မှ အခကျအခဲမဖွဈအောငျ ရှငျးရှငျး လငျးလငျး ပွငျဆငျထား တာတော့ ဟုတျတယျ။ ခါတိုငျးလညျး ရှတေို့းမရတဲ့ အခွအေနတှေပေဲ ကွုံနရေတော့ အမြားကွီးလညျး မမြှျောလငျ့ထားတော့ ဘူး။ ဘယျလို အကွောငျးအရာတှေ ဆိုတာကတော့ လောလောဆယျ မီဒီယာမှာတော့ မပွောသေးပါ ဘူး။ တတျနိုငျသမြှ တဖကျနဲ့တဖကျ တငျးမာမှုတှေ ထိပျတိုကျတိုးမှုတှေ မဖွဈအောငျ ရှကေို့ သှားမယျ ဆိုရငျလညျး တဖကျ နဲ့တဖကျ ညှိနှိုငျးပွီး ရှကေို့ ရောကျနိုငျအောငျ ဆိုတဲ့ အနအေထားတှကေိုတော့ ကနြျောတို့ စဉျးစားပေးထား ကွပါတယျ။
မေး။ ။ Bilateral ဆှေးနှေးမှုမှာ မပွလေညျတာက တပျနရော ခထြားရေးဆိုငျရာကိစ်စပဲလား။ တခွားဘယျလိုအခကျြတှေ ရှိသေးလဲ။
ဖွေ။ ။ အဓိက ကတော့ နှဈဖကျ တပျပိုငျးဆိုငျရာ နယျမွကေိစ်စတှပေဲပေါ့။ သူတို့ကလညျး နိုငျငံဆိုတာ တခုတညျးသော တပျမတျောပဲ ရှိတယျ။ နိုငျငံရဲ့ရထေု မွထေု ဆိုတာ ခှဲခွားမှု မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ ရပျတညျ ပွောဆိုမှုတှပေဲရှိထားတယျ။ နယျ နိမိတျ ပိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကကြေလြေညျလညျ ပွောမယျဆိုရငျ ရှမေ့တိုးနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေေ ဖွဈသှားတယျ။
မေး။ ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အရပျသားတှရေဲ့ သှေးထှကျသံယိုမှုနှုနျးက ပိုမြားလာတယျ။ တိုကျပှဲတှနေဲ့ ဒီအတိုငျးပဲ ဆကျ သှား မလား။ AA ရဲ့နိုငျငံရေး ရညျမှနျးခကျြကို အကောငျအထညျ ဖျောတဲ့ လမျးမှာ ရခိုငျလူထုက အနာဘကျကခညျြးပဲ ဖွဈမလား။
ဖွေ။ ။ ကနြျောတို့ဘကျမှာ အရပျသား ထိခိုကျမှုတှကေ ၄ လပိုငျးလောကျမှာ ပိုမွငျ့လာတယျ။ တိုကျပှဲအစပိုငျးမှာတော့ အဲ့ဒီ လောကျ မမြားသေးဘူး။ နောကျပိုငျးမှာကတြော့ အရပျသားထိခိုကျမှု မြားလာတာကလညျး မွနျမာစဈတပျရဲ့ လကျနကျ ကွီး ပဈခတျမှုတှကေ အစတုနျးကတော့ ရှာနားတှကေို လှမျးပဈတာပဲရှိတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ရှာထဲကို တညျ့တညျ့ ပဈတာ တှေ ပိုမြားလာတယျ။ တိုကျပှဲ ဖွဈတယျဆိုရငျ ရှာနဲ့ မီတာ ၁၀၀၀ လောကျမှာ ဖွဈတယျ ဆိုရငျတောငျ သူ့ရဲ့ အရာရှိတို့ လူကွီးပိုငျး တို့က အနာတရဖွဈရငျ ရှာကို ပိတျဆို့ပွီးတော့မှ ရှာသားတှကေို ဖမျးဆီးခညျြနှောငျတာ နှိပျစကျတာ သတျဖွတျတာ တောကျလြှောကျ လုပျလာတော့ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှကေို လူမြိုးရေးအရ တျောတျော ဦးတညျပွီး သတျဖွတျတယျလို့ မွငျတယျ။ ဒါက အမွငျမဟုတျတော့ဘူး။ အထောကျအထား အခိုငျအမာရှိထားတယျ။
ကနြျောတို့ ဘကျက ဘယျတပျမ၊ ဘယျတပျရငျးက လုပျပါတယျ ဆိုတာတှကေိုလညျး သခြော စာရငျးယူထားတယျ။ အဲ့ဒီ လို လုပျတဲ့ တပျရငျးတှကေိုလညျး ကနြျောတို့က ဖွဈရငျ ဖွဈသလို ပွနျလကျတုံ့ပွနျတာ လုပျတယျ။ သို့သျော ပွညျသူက တော့ နာတာ ပေါ့ဗြာ။ တကယျဆို ကနြျောတို့ တပျတှကေ ရှာမှာ မနပေါဘူး။ ကနြျောတို့ လှုပျရှားစဈကွောငျးတှကေ တောတောငျ တှထေဲမှာ လှုပျရှားတယျ။ သူတို့က တောတောငျတှထေဲက ယာယီစခနျးတှကေို လာတိုကျပွီဆိုရငျ သူတို့က အဲ့ဒီခှငျကို ဝငျပွီး သူတို့အထိနာရငျ ဆကျမတိုကျတော့ပဲ ရှာကို တနျးသှားတယျ။ အဲ့ဒီရှာကို ပိတျဆို့ပွီး လူငယျလူရှယျတှေ ကို ဒုက်ခပေးပွီ။
ပွီးမှ ရှာကို ပိတျဆို့စဈဆေးတယျပွောတယျ။ သူတုိ့ထငျတာ ရှာထဲမှာ လကျနကျတှေ ကညျြဆနျတှေ ဝှကျထားမယျလို့ ထငျ တာ။ ရှာသားတှကေို ကွိုးနဲ့ခညျြ နှိပျစကျ ရိုကျပုတျပွီး လကျနကျဘယျမှာ ထားသလဲပွောစမျး ဆိုတာမြိုးပေါ့။ တလောက ကနြျောတို့ မဟာမိတျတှေ နယျမွမှော လကျနကျတခြို့ တှသှေ့ားတယျ။ အဲ့ဒီလို တှမေ့လားဆိုတဲ့ ပုံစံနမှောပေါ့။ သူတို့ရဲ့ တနျပွနျ ပွောကျကြား နညျးဗြူဟာထဲက တခုပေါ့။
ပွညျသူလူထုကို ကနြျောတို့ကို မကူညီရဲအောငျ မဆကျစပျရဲအောငျ လူမြိုးရေးအရ မငျးတို့ပုနျကနျရငျ ဒါမြိုးဖွဈမယျ ဆိုပွီး လူမြိုးရေးအရ အကွောကျတရားတှကေို ဖနျတီးတာ။ ဒါက Crime Against Humanity ပဲ။ စဈရာဇဝတျမှုပဲ။ သူတို့က မာရှယျလော ထုတျပွနျထားပွီး တိုကျပှဲဖွဈလိုကျပွီ အထိနာပွီဆိုရငျ လမျးမှာ ဖွတျသှားဖွတျလာလူတှကေို ပဈသတျတယျ။ ဆိုငျကယျနဲ့ လူတယောကျသှားတယျ။ စဈဆေးဖို့ ရပျတနျ့တာ မရပျဘဲ ပွေးသှားလို့ပဈလိုကျတယျ။ သူ့ဆိုငျကယျမှာ ဝါယာ ကွိုး တခြောငျးနဲ့ ပလာယာ ပါလာတယျဆိုရငျ မိုငျးအတှကျ အသုံးပွုတယျ၊ အကွမျးဖကျသမားဆိုပွီး သတျလိုကျလို့ သတေဲ့ လူကို အကွမျးဖကျသမားလို့ ခေါငျးစဉျတပျတယျ။ ဒါကတော့ ဆိုငျကယျတူးဘောကျဈမှာ လူတိုငျးမှာ ပလာယာ ပါတယျ။ ဒါက သကျသခေံပစ်စညျးလညျး မဟုတျဘူး။ တဖကျသတျ လူသတျမှုကြူးလှနျတယျ။ ဒါတှကေို တောကျလြှောကျ လုပျတယျ။ ကနြျောတို့ဘကျကတော့ လူမြိုးရေးအရ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှကေို သတျဖွတျနတေယျလို့ လုံးဝ မှတျယူတယျ။ ကနြျောတို့က ICJ မှာ အမှုတငျတဲ့ ကိစ်စတှကေိုလညျးပဲ အမှနျတရားကို ဖျောထုတျဖို့ အတှကျ အခကျြအလကျတှေ ပေးအပျ သှားမယျ ဆိုတာ ဒါတှလေညျး ပါတယျ။
ပွီးရငျ ရခိုငျပွညျမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ ပွဿနာတှမှောလညျး အထောကျအထားတှကေိုငျထားတာ ကနြျောတို့မှာ ရှိသငျ့ သလောကျ ရှိတယျ။ အပွဈရှိတဲ့ လူကို အပွဈရှိကွောငျး အမှနျတရားကို ဖျောထုတျဖို့ကနြျောတို့က ရပျတညျသှားမယျ။
ပွီးရငျ ရခိုငျပွညျမှာ ရခိုငျလူထုက အနာပဲလားလို့ မေးတဲ့ ကိစ်စကတော့ ကနြျောတို့က အမှောငျဆုံးကာလ တခုကို ထိုးဖောကျ ဖို့အတှကျ အမြိုးသားလှတျမွောကျရေး တိုကျပှဲကို ဆငျနှဲနတောဖွဈတယျ။ Freedom isn’t Free လှတျမွောကျ မှုဆိုတာ အလကားတော့ မရဘူး။ ကနြျောတို့က ပေးဆပျမှုတှေ အမြားကွီးနဲ့ တိုကျပှဲဝငျရမှာပဲ။ ဒီအခကျအခဲတှကေို ကြျောလှားဖို့ အတှကျ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှနေဲ့ ကနြျောတို့ နယျခြဲ့ တပျကို တိုကျထုတျရမှာပဲ။
သူတို့ ရခိုငျပွညျမှာ ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာ ပွညျသူလူထုရဲ့ မလုံခွုံမှုတှေ အသကျအန်တရာယျတှေ တိုငျးရငျးသား တခုနဲ့တခု ကွား မှာ ပွဿနာတှကေို ဖနျတီးနတောက မွနျမာ စဈတပျပဲ။ သူမရှိရငျ ပွညျသူလူထုရဲ့ လုံခွုံရေးကို ကနြျောတို့ တာဝနျယူလို့ ရပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ကို ကနြျောတို့ တိုကျထုတျရမယျ။ ကိုယျလညျး နာမှာပေါ့ဗြာ။ ဒါကို ကနြျောတို့ ရငျမဆိုငျလို့ မရဘူး။
မေး။ ။ ရခိုငျ တျောလှနျရေးမှာ Timeline သတျမှတျထားတာ ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတျ လူထုက ဘယျအခြိနျ ဘယျကာလ မှနျး မသိတာကို ဆကျပွီး ဒါတှကွေုံနရေမှာလား။
ဖွေ။ ။ အခြိနျကာလဆိုတာကို ပုံသပွေောဖို့ ဆိုတာက အခွအေနကေို ပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားတာက ပိုလကျတှေ့ ဆနျ တယျ။ ငါတို့ ၆ လနဲ့ တိုကျပွီး ပွီးသှားမယျ ဆိုတာက ၆ လပွတျ ကြူရှငျ တကျနတော မဟုတျဘူးလေ။ ၁ နှဈ တိုကျလို့ မရရငျတော့ ၂ နှဈနဲ့ တိုကျရမှာပေါ့။ ၂ နှဈနဲ့ မရရငျ ၃ နှဈ တိုကျရမှာပေါ့။ ကနြျော ထငျတာတော့ ကနြျောတို့ရဲ့ တိုကျပှဲနဲ့ အခုအလားအလာ အတိုငျးဆို ကနြျောတို့ ကွိုးစားမှုက ၂၀၂၅ မတိုငျခငျ တစုံတရာ အပွောငျးအလဲကွီးတခု ကနြျောတို့ ဖနျတီးနိုငျဖို့ အတှကျ သခြောပေါကျ ခနျ့မှနျးထားတယျ။
မေး ။ ။ တျောလှနျရေး လုပျနကွေတဲ့အထဲ ကရငျ၊ ကခငျြ ဆိုရငျ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈလိုကျ ပွလေညျလိုကျ ခဏ အပဈရပျလိုကျနဲ့ နှဈကာလတှေ အမြားကွီး ရှညျကွာလာတော့ ရခိုငျလညျး ဒီလိုပဲ သှားလိမျ့မယျလို့ သုံးသပျခကျြတှေ ရှိတယျ။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျတယျ။ ဘာဖွဈလို့ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ တျောလှနျရေးက နှဈပေါငျး ၇၀၊ နှဈပေါငျး ၇၀ ဆိုပွီး စကားကို လှယျလှယျနဲ့ ပွောပွီး အခြိနျကာလတှကေို ပွဌာနျးနကွေတယျ။ တကယျဆိုရငျ တျောလှနျရေး လုပျနပေါတယျဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ တှကေ တကယျ သူတို့ နှဈပေါငျး ၇၀ မတိုကျပါဘူး။ သူတို့ အလုပျမကွိုးစားဘူး။ ကနြျော သခြော ပွောရဲတယျ။ ခဏနေ အပဈရပျလိုကျ လူကွီးတှကေ ဝိုငျသောကျလိုကျနဲ့ ဇိမျခံနကွေတာ မြားတယျ။ အောကျခွေ ရဲဘျောတှပေဲ လစာ မရဘူး။ ဒုက်ခတှေ ခံပွီး သူတို့ ဘဝအခြိနျတှကေို လောငျကြှမျးပေးဆပျ နရေရငျး အဘိုးကွီးတှေ ဖွဈသှားကွတာ မြားတယျ။ တကယျ လညျး ဒါမြိုး တိုကျနတော မဟုတျဘူးလေ။ ဟိုဘကျမှာ ၁၅ နှဈလောကျ အပဈရပျ ထားတယျ။ ၁၅ နှဈလောကျ လူကွီးတှေ က ခမျြးသာနတေယျ။ ရဲဘျောတှကေ အခြိနျတှေ လောငျကြှမျးပွီး ဘဝတှေ ပကျြစီးသှားတယျ။ တကယျတိုကျတာမှ မဟုတျတာ။ ပွီးရငျ ကောငျးကောငျးလညျး မတညျဆောကျကွဘူး။
တကယျတညျဆောကျတဲ့ အုပျစုတှဆေိုရငျ အခုခြိနျမှာ ကွညျ့ပါလား။ ဝ အဖှဲ့ဆို စဈမဖွဈဘူး။ သူတညျဆောကျတယျ။ သူ့မှာ တညျဆောကျထားတာနဲ့ အငျအားခိုငျမာသှားတော့ သူ့ပွညျသူရဲ့ လုံခွုံရေးကို သူအာမခံပေးထားနိုငျတယျ။ မိုငျးလား အဖှဲ့ကို ကွညျ့ပါလား။ သူစဈမဖွဈဘူး။ သူကွိုးစားတယျ။ တညျဆောကျတယျ။ သူ့ရဲ့ ခိုငျမာမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ပွညျသူကို အာမခံ ထားနိုငျ တယျ။ တခုခုတော့ အကောငျအထညျကို ပျေါအောငျ ကွိုးစားရမယျလေ။ တိုကျလို့ မနိုငျရငျတောငျ တညျဆောကျမှု အငျအား ကွီးထှားလာရမယျ။ ကိုယျက ပွညျသူကို အကာအကှယျ ပေးထားနိုငျရမယျ။ ဒါတှေ ရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့က လကျတှေ့ သဘောကိုပဲ ပွောလိုတယျ။ စကားတှကေို ရောယောငျပွီး ဖွီးပွောပွီး နှဈ ၇၀ တိုကျနသေလို ပွောတာတော့ လကျမခံပါဘူး။
ကနြျောတို့က တိုကျရငျးနဲ့လညျး တညျဆောကျနပေါတယျ။ ကနြျောတို့ ရက်ခိုငျတပျက တိုကျနတေော့ အသအေပြောကျ တှေ တော့ ရှိတယျ။ ဆုံးရှုံးမှုတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ တောကျလြှောကျတညျဆောကျတယျ။ တညျဆောကျ နိုငျတဲ့ စှမျးရညျကွောငျ့ ကနြျောတို့မှာ တိုးတကျမှုတှေ ရှိတယျ။ ဒီအတိုငျး တစိုကျမတျမတျ တညျဆောကျသှားရငျ နောကျ ၃ နှဈ ၄ နှဈဆိုရငျ ကနြျောတို့တျောတျောတော့ တညျဆောကျနိုငျမှာပဲ။
မေး။ ။ ဗိုလျခြုပျ ပွောတဲ့ ၂၀၂၅ ဆိုတာက ဝ တို့ မိုငျးလားတို့လို နရောတခုလိုမြိုး ဆိုလိုတဲ့ သဘောလား။ ရခိုငျပွညျနယျ တပွညျနယျလုံးကို ပွောနတောလား။
ဖွေ။ ။ အဲ့ဒါကတော့ နယျမွဆေိုတာကတော့ ကနြျောတို့ကတော့ ရခိုငျ နယျနိမိတျမှာ အကုနျလုံးကို ရခိုငျနယျမွလေို့ သတျ မှတျ တယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ရဲ့စဈရေးအရ ဘယျအတိုငျးအတာထိကို ပွနျလညျ ရယူနိုငျမလဲ။ ထိနျးခြုပျနိုငျမလဲ ဆိုတာ ကတော့ အခွအေနတှေပေျေါမှာ အမြားကွီး ထညျ့သှငျး စဉျးစားစရာတော့ ရှိပါတယျ။ သို့သျောလညျးပဲ ဒီထကျတော့ အမြားကွီး ပိုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျဖို့ ကနြျောတို့ ယုံကွညျထားတယျ။
မေး ။ ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝ ထဲမှာဆိုရငျ ခငျြးတှကေ AA က ဖိနှိပျတာ ခံရတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျတယျ ဆိုတာမြိုး ဝဖေနျသံတှေ ထှကျလာတာ ရှိသလို ခငျြးနဲ့ ရခိုငျကွား လူမြိုးရေး ပဋိပက်ခလို ဖွဈတော့မယျဆိုပွီး အမွငျစောငျးမှု တှကေလညျး ရှိနကွေတယျ။ ဘာပွောခငျြပါသလဲ။
ဖွေ။ ။ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးက အိမျနီးခငျြးဆိုတာထကျ အမြားကွီး နကျရှိုငျးပါတယျ။ သူမြားတှကေတော့ အိမျနီးခငျြးလို့ပွောတယျ။ အဲ့ဒီ့ထကျ အမြားကွီး နကျရှိုငျးပါတယျ။ ခငျြးလူမြိုးက ခငျြးပွညျနယျမှာ ၃ သိနျးခှဲလောကျ နတေယျဆိုရငျ ရခိုငျပွညျနယျမှာ လညျး ၁ သိနျးခှဲလောကျ နတေယျ။ ရခိုငျပွညျသား ခငျြးလူမြိုးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ရခိုငျပွညျမှာနတေဲ့ ခငျြးလူမြိုး တှေ ဆိုရငျ ဗုဒ်ဒဘာသာ ကိုးကှယျတာ ရှိတယျ။ ခရဈယာနျဘာသာ ကိုးကှယျတာ ရှိတယျ။ ခငျြးတော့ ခငျြးပဲ မြိုးနှယျစုတှေ တော့ မတူကွဘူးပေါ့။ ကနြျောကတော့ ကနြျောတို့ရဲ့ ULA (ရခိုငျ အမြိုးသား အဖှဲ့ခြုပျ) မှာ ရက်ခိတ လမျးစဉျကို ပွဌာနျး ထားတယျ ဆိုပမေယျ့ ဒီဟာက ရခိုငျတခုတညျး အတှကျ မဟုတျပါဘူး။ ရခိုငျပွညျမှာ နထေိုငျတဲ့ မတူညီတဲ့ ဘာသာကို ကိုးကှယျကွတဲ့ လူမြိုးစု အသီးသီးရဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကွညျပိုငျခှငျ့၊ လှတျလပျခှငျ့တှကေို ကနြျောတို့က လုံးဝ အသိအမှတျပွုတယျ။ ခငျြးလူမြိုးတှဆေိုတာ အငျမတနျ ရိုးသားပွီးမှ စိတျနစေိတျထား ကောငျးမှနျတဲ့ လူမြိုးတှဖွေဈတယျ။ သစ်စာရှိတယျ။ အကွငျနာတရား ရှိတယျ။ ကနြျောတို့ ရက်ခိုငျ့တပျမတျောထဲမှာ ရခိုငျပွီးရငျ ခငျြးလူမြိုးက ဒုတိယ အမြားဆုံးလို့ ပွောလို့ ရတယျ။ ကနြျောတို့ တပျထဲမှာ ရှိတယျ။
အခုလညျးပဲ ကွတေော့ မကွညောသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရခိုငျပွညျမှာ နတေဲ့ ခငျြးလူမြိုးတှကေ ကနြျောတို့ မှနျးထားတဲ့ အခွအေနတေခုကို ရောကျရငျ သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့တှကေ အစ ကနြျောတို့ အမြားကွီး စဉျးစားထားတာ ရှိတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ပလကျဝနယျမွနေဲ့ ပတျသကျပွီးမှ နညျးနညျးတော့ အငွငျးအခုနျနဲ့ ဝဖေနျမှုတှတေော့ ရှိတာပေါ့ဗြာ။ ဒါကတော့ တျောလှနျရေးတခုလုပျပွီ၊ လကျနကျကိုငျပွီးမှ စဈပှဲတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျတော့ ကနြေပျတဲ့ လူလညျး ရှိမယျ၊ မကနြေပျတဲ့ လူလညျး ရှိမယျ။ ဒါပမေယျ့လို့ ကနြျောတို့ရဲ့ နိုငျငံရေး ရပျတညျခကျြနဲ့ မူဝါဒကတော့ ပလကျဝ ဒသေမှာ နထေိုငျတဲ့ လူတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ကနြျောတို့က လိပျပွာသနျ့တယျ။ သူတို့ရဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ကနြျောတို့က ဖွူစငျတဲ့စိတျထားနဲ့ ရပျတညျ ခကျြတှေ ရှိတယျ။ ပလကျဝ နယျမွဆေိုတာ သမိုငျးကွောငျးအရ ရခိုငျနဲ့ အမွဲတမျး ဆကျစပျနတေဲ့ နယျနိမိတျ ဖွဈတယျ ဆိုတော့ ပွဿနာတှရေိုကျခတျမှုတှေ ရှိလာတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ဆကျစပျမှုရိုကျခတျမှုတှတေော့ ရှိမှာပေါ့ဗြာ။
ပလကျဝမှာ နတေဲ့ ခူမီးလူမြိုးတှေ ဆိုရငျ ခူမီးက ရခိုငျပွညျထဲမှာ နတေဲ့ ခမီဆိုတာ ရှိတယျ။ အပျေါခမီး၊ အောကျခမီးပေါ့။ ပလကျဝနယျထဲက ခူမီးတှကေတြော့ ခရဈယာနျ ကိုးကှယျတာမြားတော့ သူတို့ရဲ့ အသငျးတျောတှကေ ဆကျစပျမှုနဲ့ ခငျြးနဲ့ ဆကျစပျပွီး ခူမီးနောကျကမှ ကှငျးစ ကှငျးပိတျနဲ့ ခငျြးဆိုပွီးတော့ ထညျ့ထားတာပေါ့ဗြာ။ ရခိုငျပွညျထဲမှာ နတေဲ့ ခမီကတြော့ ရခိုငျမြိုးနှယျစုနဲ့ နီးစပျရာနဲ့ ကိုးကှယျယုံကွညျမှုတှကေို ပွောကွတာပါ။ တကယျဆိုရငျ ဒါက ဆကျစပျနတေဲ့ သှေးခငျြးတှေ ပါပဲ။ အခု ခူမီး အုပျစုကို ဦးဆောငျနတေဲ့ လူတှကေ စဈသားဟောငျးတှပေေါ့ဗြာ။ ကနြျောတို့ကို အမွဲတမျး တိုကျခိုကျမှုတှေ လုပျနတေဲ့ ဦးစိုးထကျတို့လို လူမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ သူတို့ဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့ရဲ့ ရပျတညျခကျြ ဘာလဲဆိုတာ သူ သိပျ မသိ လောကျဘူး။
ဒါပမေယျ့ ပွဿနာတခု ဖွဈလိုကျတိုငျး အဆိုးအမွငျနဲ့ ပွောလပွေ့ောထ ရှိတယျ။ ကနြျောတို့ကို အကောငျးပွောပါလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူ လှတျလပျစှာ မွငျပိုငျခှငျ့၊ ဝဖေနျပိုငျခှငျ့ ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီလို လူတှကေ စဈသားဟောငျးတှပေါ။ တဖကျက လညျး NLD ပါတီ ကို ဝငျထားတယျ။ NLD ရဲ့ အောငျမွငျတဲ့ ပလကျဖောငျးကို သူနငျးပွီးတော့မှ သူ့ရဲ့အတှငျးစိတျက စဈသား ဟောငျး စိတျဓာတျပါ။ ဒါတှနေဲ့ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့လုပျရပျကတော့ သူတို့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျတှကေ စဈသားဟောငျး စိတျ နဲ့ ကနြျောတို့ကို ဆနျ့ကငျြနတေော့ တခြို့လူတှကေ အမွငျပွောငျးကုနျတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ကိစ်စတော့ မရှိပါဘူး။ ရရှေညျ ခရီး ဖွဈပါတယျ။ ရတေိုမှာ အမွငျလှဲမှားမှု ရှိရငျတောငျ ရရှေညျခရီးမှာ ကနြျောတို့က အလုပျနဲ့ပဲ သကျသပွေသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မေး။ ။ ဗိုလျခြုပျပွောတဲ့ ခငျြးလူမြိုးတှအေပျေါ စိတျသဘောထား၊ အမွငျတှကေ ဗိုလျခြုပျရဲ့ အောကျခွကေ စဈသားတှကေ ရော လကျခံနားလညျလား။ ဒီလို ကငျြ့သုံးလား။
ဖွေ။ ။ ကနြျောတို့ ရခိုငျတှမှောလညျး အမွငျမကယျြတဲ့ ရခိုငျတှတေော့ အမြားကွီးရှိတယျ။ သို့သျောလညျး အမွငျ ကဉျြးမွောငျး မှုကွောငျ့ ကနြျောတို့ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ နဈနာမှုတှကေို အမွဲ ထောကျပွတယျ။ ကနြျောတို့ ရခိုငျစဈသားတှကေ စညျးကမျးမလိုကျနာတဲ့ သူတှလေညျး အနညျးအကဉျြးတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ မြားသောအားဖွငျ့က အမိနျ့ကို နာခံတဲ့ လူတှေ အမြားကွီးပါ။ ပိုကောငျးပါတယျ။ ကနြျောတို့ ဒါကို အောငျမွငျသှားမှာပါ။
မေး။ ။ ခငျြး လူဦးရကေ ရက်ခိုငျစဈတပျထဲမှာ အမြားကွီးဆိုတာက ဘယျလောကျ ရှိပွီလဲ။ သူတို့ကရော ဘယျလို ပုံစံတှနေဲ့ ဝငျလာကွတာလဲ။
ဖွေ။ ။ ကနြျောတို့ ရက်ခိုငျတပျထဲမှာက စုဆောငျးရေး လုပျတဲ့ပုံစံ မဟုတျပါဘူး။ အဓိက ကိုယျပိုငျ ရပျတညျခကျြနဲ့ တာဝနျ သိစိတျကိုပဲ အခွခေံပွီး စညျးရုံးရေး လုပျတာပါ။ ကနြျောတို့ ပွောပွပါတယျ။ ခငျြးတှရေော ခူမီးလူမြိုးတှရေော ရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ ပွောပွတာက ငါတို့ အရငျက ရက်ခိုငျနိုငျငံတျောကို အတူတူ တညျထောငျခဲ့ကွတယျ။ ရက်ခိုငျနိုငျငံတျောကို ခငျဗြားတို့ ကနြျောတို့က အတူတူ ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီနိုငျငံကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ အခှငျ့အရေးတှကေို ငါတို့ တနျးတူ ရသငျ့တယျ။ ဒီအခှငျ့အရေး တှကေို တနျးတူရဖို့ ဆိုရငျ ငါတို့ တာဝနျတှကေိုလညျး အတူတူယူရမယျ။ အတူတူ ကာကှယျပွီး အတူတူနထေိုငျရအောငျ ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို အခွခေံပွီး စညျးရုံးတယျ။ အခုခြိနျဆို သူတို့ တျောတျော ပါပါတယျ။ ရာဂဏနျးအထကျတော့ ရှိတယျ။ ၂၀၀ ကြျော ရှိပါပွီ။ နောကျလညျး အမြားကွီး ပူးပေါငျး ပါဝငျလာဖို့ မြှျောလငျ့ ထားတယျ။
မေး။ ။ ခငျြးလူဦးရေ ၂၀၀ ကြျောဆိုတာက တိုကျပှဲဝငျတဲ့ မွပွေငျမှာ ရှိနတောလား။ ဘယျလို အခွအေနတှေမှော ရှိလဲ။ သူတို့ကရော လကျရှိ ရာထူးအမွငျ့ဆုံး ဘယျလောကျအထိ ရှိလဲ။
ဖွေ။ ။ ကနြျောတို့ တျောလှနျရေးတပျ ဆိုတာကတော့ သူပုနျတပျဆိုတော့ ရာထူးတှကေို အမြားကွီး မွှောကျစားတဲ့ ကွယျ ပှငျ့တှနေဲ့ တဝငျ့ဝငျ့တကားကားတော့ မဟုတျဘူး။ သူက တပျခှဲကို ဦးဆောငျ နိုငျတယျဆိုရငျ သူ့ကို တပျခှဲကို ဦးဆောငျပွီး တိုကျပှဲဝငျခိုငျးတာပေါ့။ တပျမဟာမှူးတှေ အဆငျ့တှမှောတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါကလညျး သူ့ရဲ့စဈမှုထမျး သကျတမျးရယျ သူ့ရဲ့လုပျရညျကိုငျရညျ ပျေါမှာပဲ မူတညျတယျ။ လူမြိုးစု အလိုကျ စဈတပျမှာ ဘယျလူမြိုးစုကို ဘယျရာ ထူးပေးမယျဆိုတဲ့ ကွောငျတောငျတောငျ အတှေးအချေါတော့ ကနြျောတို့ မလုပျဘူး။ တကယျလို့ ခူမီးလူမြိုးက အရညျအခငျြး ရှိတယျဆိုရငျ သူ့ကို တပျမမှူးလညျး ပေးရငျ ပေးမှာပဲ။ သူတကယျ အရညျအခငျြးဖွဈရငျ သူလညျး ဦးစီးခြုပျ ဖွဈလာမှာပဲ။ ရခိုငျ အမြိုးသမီး သို့မဟုတျ ကမနျ အမြိုးသမီးပေါ့။ သူလညျး အရညျအခငျြး ရှိရငျ ဗိုလျမှူးကွီး ဖွဈရငျ ဖွဈမှာပဲ။ လူတယောကျ ခငျြး စှမျးဆောငျရညျပျေါ မူတညျပါတယျ။ လူမြိုးစု အလိုကျတော့ ရာထူးပေး လို့မဖွဈပါဘူး။
မေး။ ။ ဒါဆို ရခိုငျပွညျနယျထဲက လူမြိုးစုတှလေညျး ဝငျလာတယျဆိုတော့ အစ်စလမျ ဘာသာဝငျ မှတျစလငျ အသိုငျးအဝိုငျး တှရေော တပျထဲဝငျလာတာ ရှိလား။
ဖွေ။ ။ သူတို့တော့ ဝငျခငျြတယျ။ ဝငျခငျြလို့ ကမျးလှမျးတာတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ။ ဒီအပိုငျးမှာ ကတြော့ ကနြျောတို့က အနာဂတျမှာတော့ ဒါမြိုးခှဲခွားမှာ မဟုတျဘူး။ အခုလညျး မခှဲခွားဘူး။ ဒါပမေယျ့ သတိတော့ ထားပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ လကျခံလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ ကနြျောတို့ ပွိုငျဘကျ ရနျသူက လကျညှိုးထိုးပွီး အကွမျးဖကျသမားတှကေို စုဆောငျးနပေါတယျ ဆိုပွီး အမွတျထုတျခွငျးကို ခံရမှာပေါ့ဗြာ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီအပိုငျးကိုတော့ အရမျးသတိထားတဲ့ အနအေထားရှိတယျ။ သို့သျော လညျး ရခိုငျပွညျမှာနတေဲ့ မှတျစလငျတှနေဲ့ ကနြျောတို့က ပွပွေဈတဲ့ ဆကျဆံရေးကို အမွဲတမျး ထိနျးသိမျးထားဖို့ သတိထား ပွီး ကွိုးစားတယျ။
မေး။ ။ အခု ဗိုလျခြုပျပွောပုံအရ ဆိုရငျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးက တခွားလူမြိုးတှနေဲ့ မြိုးနှယျစုတှကေလညျး ဒီတျောလှနျရေး အောငျမွငျရငျ အကြိုးအမွတျ ခံစားရမယျဆိုတော့ ဒါကရှငျးပွပါဦး။
ဖွေ။ ။ ဒါက မပေးလို့မရဘူး။ ဒါမြိုး မပေးရငျ ကနြျောတို့ ဗမာလို ဖွဈသှားမှာ။ ကနြျောတို့ ရခိုငျတှကေ မြိုးခဈြစိတျ ပွငျးထနျ တယျ ဆိုတာကတော့ ပွငျးထနျတယျလို့တော့ ပွောလို့ မရပါဘူး။ လူမြိုးတိုငျးမှာ ကိုယျ့လူမြိုး ကိုယျခဈြတဲ့ စိတျ ကတော့ ရှိတယျ။ မတရားခံနရေတဲ့ အခြိနျမှာကတြော့ စုစညျးမှု ခှနျအားက ပိုကောငျးမှာပေါ့။ ကနြျောတို့ ရခိုငျတှကေ ရခိုငျကို ခဈြ သလို ခငျြးတှလေညျး ခငျြးကိုခဈြမှာပဲ။ ကနြျောတို့ ခံစားဖူးတဲ့အခြိနျမှာ စာနာပေးလို့ ရတယျ။ ရခိုငျပွညျမှာရှိတဲ့ လူမြိုးစုတှေ ကို ကိုယျ့ထကျငယျတယျဆိုပွီး ကိုယျအသာစီးရတဲ့ အခြိနျမှာ ဖိနှိပျမယျဆိုရငျ ဗမာပွညျ ပွညျတှငျးစဈဖွဈသလို ကနြျောတို့လညျး တခါမှ အေးခမျြးမှာ မဟုတျဘူး။ နောကျတခုက ရခိုငျတှရေဲ့ နိုငျငံရေးသမိုငျးမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အစဉျအလာ တှနေဲ့ အမြားကွီး ရပျတညျနိုငျခဲ့တယျ။ ရခိုငျပွညျ ဘာ့ကွောငျ့ ခမျြးသာလဲ၊ တိုးတကျလဲ၊ ရခိုငျတှေ ဘာကွောငျ့ ကမ်ဘာနဲ့ တနျးတူ နနေိုငျခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဒါဟာ ကနြျောတို့ ရခိုငျဘုရငျတှေ ရခိုငျကို ခေါငျးဆောငျခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ တနျးတူအခှငျ့အရေး၊ လှတျလပျပိုငျခှငျ့တှကေို အသိအမှတျပွု ခဲ့တယျ။ ကာကှယျထိနျးသိမျးခဲ့တယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကနြျောတို့က ဒီအစဉျအလာတှေ ကို ပွနျလညျ ဖျောထုတျဖို့ ကွိုးစားရမယျ။ ဒါကကနြျောတို့ လမျးကွောငျးထဲမှာ ရှိနတေဲ့ အစဉျအလာတှပေါပဲ။
မေး။ ။ ပွီးခဲ့တဲ့လက လူမှုကှနျရကျမှာ လူတယောကျကို သစ်စာဖောကျဆိုပွီး ဝိုငျးရိုကျသတျတဲ့ ဖိုငျတခု ပြံ့လာတယျ။ AA စဈသားတှလေို့ ယူဆရတဲ့ သူတှကေ လုပျတာပေါ့။ ဒါက AA ထဲမှာ ဖွဈသှားတာလား။ အမြိုးသားရေးနဲ့ ပတျသကျရငျ အတိမျးစောငျးမခံဘဲ ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ကိုငျတှယျဖို့ တပျထဲမှာ အခှငျ့ပေးထားပါသလား။
ဖွေ။ ။ တျောလှနျရေးတိုငျးမှာတော့ သစ်စာစောငျ့စညျးမှုနဲ့ ပတျသကျရငျ တိတိကကြတြော့ ရှိကွပါတယျ။ သို့သျောလညျး ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ရကျရကျစကျစကျ ဆိုတာမြိုးတော့ ခှငျ့မပွုပါဘူး။ အဲ့ဒီ့ ဗီဒီယိုဖိုငျနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနြျောတို့ သခြော စုံစမျးတော့ ကနြျောတို့ တပျထဲမှာ ဒီလိုမြိုး ရကျရကျစကျစကျ လူသတျမှု ဖွဈခဲ့တယျဆိုတာ မှနျပါတယျ။ အဲ့ဒါက တခုတညျး မဟုတျပါဘူး။ ၂ ခု၊ ၃ ခုတောငျ ရှိခဲ့တယျ ဆိုတာကို စဈဆေး တှရှေိ့ပါတယျ။ ကနြျောတို့ တပျမှာက တျောလှနျရေးတပျ ဆိုတော့ဗြာ။ ကနြျော ဆငျခွပေေးတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ လူငယျလူရှယျတှမြေားတယျ။ တခြို့ကတြော့ တိုကျပှဲတှေ အရမျး ပွငျးထနျနတေဲ့ ကာလတှမှော သှေးဆူတာတှေ ရှိတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ လူကွီးတှနေဲ့ ဝေးတော့ ဒါမြိုး ဖွဈစဉျ ၁ ခု ၂ခု ဖွဈခဲ့တယျ။ ဒါကို စဈဆေးတှရှေိ့တော့ ဒီမှာ ပါဝငျတဲ့လူတှကေို ကနြျောတို့ အရေးယူထားတယျ။ အကုနျလုံး ရာထူးတှေ ဖွုတျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့မှ ခွကေငျြးတှခေတျပွီး အရေးယူ ထား တာပေါ့။ တခြို့ကတြော့ ကနြျောတို့ သဒေဏျ ပေးပဈလိုကျတာ ရှိတယျ။ ဒါကတော့ မှနျပါတယျ။ ဒါမြိုး လူသတျမှု ဖွဈသှား တာပေါ့ဗြာ။ ရကျရကျစကျစကျပေါ့။ ဒါမြိုးတှကေို ကနြျောတို့ ခှငျ့မပွုပါဘူး။ ကနြျောတို့ အရေးယူပါတယျ။ ဘယျလိုတှေ ကွောငျ့ ဖွဈသှားတာလဲဆိုတော့ တခြို့လကျနကျခဲယမျးတှနေဲ့ ထှကျပွေးဖို့ ကွိုးစားတယျ။ ဒါကို တကွိမျ ဖမျးထားလိုကျ တယျ ပေါ့။
နောကျတကွိမျဆိုရငျ သူက တယောကျတညျး ထှကျပွေးဖို့ ကွိုးစားတာ မဟုတျဘဲ သူမြားကိုပါ စညျးရုံးတာပေါ့နျော။ လိုကျနတေဲ့ ရဲဘျောတှကွေားမှာ ဒီကောငျ တကယျ သစ်စာဖောကျတာပဲ ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ သူတို့ မထိနျးမသိမျးနိုငျ အဲ့ဒီလို ဖွဈသှားတာပေါ့။
မေး။ ။ သဆေုံးသှားတဲ့ အသတျခံလိုကျရတဲ့ သူတှရေဲ့ မိသားစုဝငျတှကေို ပွနျ အကွောငျးကွားပေးတာရော ရှိလား။
ဖွေ။ ။ ဒီအခြိနျ ကနြျောတို့ တျောလှနျရေးကာလမှာ မဖွဈသငျ့တာကို မဖွဈအောငျ ထိနျးကြောငျးတာကတော့ မှနျတယျ။ သို့သျောလညျးပဲ ဒီ့ထကျပိုပွီးမှ အရေးကွီးတဲ့ အခြိနျကို ရငျဆိုငျနတေဲ့ အခြိနျမှာ တခြို့ပွဿနာကို အလှနျတရာတော့ ခြဲ့ကားမှာတော့ မဟုတျဘူး။ အပွဈရှိတဲ့ လူကိုတော့ အပွဈယူမယျ။ မိသားစုအနနေဲ့ သိပိုငျခှငျ့ ရှိတယျဆိုရငျ မိသားစုကို သိပိုငျခှငျ့ ပေးတယျ။ နောကျတခါ မဖွဈဖို့ကိုလညျး ကနြျောတို့ ထိနျးသိမျးတယျ။ တကယျလို့ လိုအပျခဲ့ရငျတောငျ အဲ့ဒီလူကို မိသားစုရှမှေ့ာတောငျ သတျပဈလိုကျရတာလညျး ရှိတယျ။ ဒီမှာ မငျးတို့ မိသားစုက ဒီလိုလုပျတယျဆိုပွီး သတျပဈလိုကျ တာထကျ ဒီလောကျကွီးတဲ့ ပွဈဒဏျ ဥပမာ မုဒိမျးမှုတခု ဖွဈတယျဆိုရငျ သူက သာမနျ ဖွဈစဉျပျေါမှာ မူတညျပွီး ခှငျ့လှတျ လို့ ရပမေယျ့ ရှာသားတှကေ ခှငျ့မလှတျဘူးဆိုရငျ ရှာသားတှေ ဘာဖွဈခငျြလဲ။ ငါတို့တာဝနျ ခံတယျ။ ငါတို့ ရဲဘျောမို့ဆိုပွီး မဖွဈစရေဘူးဆိုပွီး အရေးယူပွရပါတယျ။ ဒါကတော့ ရှိပါတယျ။ တျောလှနျရေး လောကမှာ ရှောငျလှဲလို့ မရတဲ့ ဖွဈစဉျတှေ ပါ။ ကနြျောတို့ ဒါမြိုးတှကေို အလှတျမပေးပါဘူး။ အရေးယူပါတယျ။ လူသတျဝါဒတှကေို ကနြျောတို့ ခှငျ့မလှတျပါဘူး။
မေး။ ။ ဒီ ၂ မှု၊ ၃ မှု ဖွဈသှားတယျဆိုတာက အကုနျလုံး ရခိုငျက ရှတေ့နျးမှာ ဖွဈတာလား။ စုံစမျးစဈဆေးပွီး နောကျမှာ ရော ဒါမြိုးတှေ ထပျမဖွဈအောငျ စညျးမဉျြးစညျးကမျး အသဈတှေ ထပျခတြာ ရှိလား။
ဖွေ။ ။ ဟုတျတယျ။ ဖွဈတာကလညျး တပျမှူးငယျက ပွဈဒဏျပေးတာတှကေို ဗီဒီယို ရိုကျတယျဆိုတာ အစဉျအလာ မရှိပါ ဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အုပျစုကတြော့ ဗီဒီယိုရိုကျတယျ။ အဲ့ဒီ့ တပျမှူးငယျက ရနျသူလကျထဲကို ရောကျသှားတယျ။ တပျမ ၂၂၊ ၂၀၅ အဖှဲ့က ဖမျးသှားတယျ။ အဖမျးခံရတော့ သူ့ရဲ့ဖုနျးမှာ ပါသှားတယျ။ အဲ့ဒါကို မွနျမာ ထောကျလှမျးရေးတှကေ အခြိနျ တခု ကို ရောကျရငျ အဲ့ဒါကို စိတျဓာတျ စဈဆငျရေး လုပျတာပေါ့ဗြာ။ သဘောက သူ့ကို ကနြျောတို့က အောငျပှဲခံနတေဲ့ ဗီဒီယိုတှေ ထှကျလာရငျ အဲ့ဒါတှကေို အာရုံပွောငျးဖို့ အတှကျ အဲ့ဒီလိုမြိုးတှေ ထုတျပွီးမှ လုပျတတျပါတယျ။ စညျးမဉျြး စညျးကမျးတှကေတော့ နဂိုကတညျးက ရှိပါတယျ။ ဒါမြိုးတှေ ဖွဈလာရငျတော့ ထပျလောငျးပွီး မဖွဈဖို့တော့ ပွနျလညျ သတိပေးရတာတော့ ရှိပါတယျ။
မေး။ ။ ပဋိပက်ခတှေ တောကျလြှောကျ ဖွဈလာတဲ့ နောကျမှာ လုပျကွံသတျဖွတျခံရတာတှေ နောကျပွီး လှတျတျော အမတျ ဦးဝှတေ့ငျးကို ဖမျးထားတာမြိုးနဲ့ ဖမျးမိတဲ့ စဈသားတှကေို လူလဲမယျ ဆိုတာတှကေ အကွမျးဖကျသမားတှရေဲ့ လုပျရပျလို့ နိုငျငံရေး အသိုငျးအဝိုငျးမှာ ပွောတာရှိတယျ။ တခွား တိုငျးရငျးသား တပျတှမှော ဒီလိုလုပျရပျတှေ မတှရေ့ဘူး။ ဒီအပျေါ ရော ဘယျလို တုံ့ပွနျခငျြပါသလဲ။
ဖွေ။ ။ စဈပှဲဖွဈတဲ့ ဒသေဆိုတော့ အခွအေနကေတော့ ရှုပျထှေးမှုတှေ ရှိတယျ။ ကနြျောတို့ရဲ့ နာမညျကို အသုံးခပြွီး ဓားပွ တိုကျတာလညျး ရှိတယျ။ ငှကွေေး လိမျလညျ တောငျးဆိုကွတဲ့ လိမျလညျမှုတှလေညျး ရှိတယျ။ ရနျသူ ကိုယျတိုငျကလညျး ကနြျောတို့ကို ပုံမှားရိုကျပွီးမှ လူထုထဲမှာ ကွောကျလနျ့အောငျ အယုံအကွညျမရှိအောငျ ရှံရှာသှားအောငျ ပုံမှားရိုကျတာ တှေ လညျး ရှိပါတယျ။ ပွီးရငျ ရခိုငျပွညျမှာ မူးယဈဂိုဏျးတှလေညျး ရှိတယျ။ မူးယဈဆေးဂိုဏျးတှကေ တယောကျနဲ့ တယောကျ ငှကွေေးလိမျလညျတဲ့ အခါမှာ ကနြျောတို့ နာမညျကို အသုံးခတြာတို့ နယျစပျဘကျမှာ မှတျစလငျတှေ အခငျြး ခငျြးကွားမှာ ပွဿနာဖွဈရငျတောငျ ကနြျောတို့ပဲ လုပျသှားသလို ကွုံနရေတာ ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေိုလညျး ကနြျောတို့က အရမျးသတိထား ပွီးမှ ကိုငျတှယျ ပွောဆိုရပါတယျ။ ဒါတှကေ ရှောငျလှဲလို့ မရဘဲရှိနမှောပါ။ သို့သျောလညျး ပွောတိုငျးလညျး မယုံနဲ့ပေါ့ဗြာ။
ကိုယျ့ဘာသာ ဖွဈနိုငျ၏ မဖွဈနိုငျ၏ကတော့ ပညာရှိမကျြစိနဲ့ အတှေးအချေါနဲ့ စဉျးစားဖို့ လိုပါတယျ။ နောကျတခကျြ ကတော့ ရနျသူရဲ့ ဓားစာခံ၊ သုံ့ပနျးဖမျးတာတို့က တခါတလေ သူတို့က ဝါဒဖွနျ့တယျ။ အစိုးရဝနျထမျးတှကေို ဖမျးဆီးတယျ ဆိုပွီး တော့ ပေါ့။ ကနြျောတို့ ဖမျးတဲ့အထဲမှာ လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့တှကေိုပဲ ထိနျးသိမျးတယျ။ သာမနျ အစိုးရ ဝနျထမျးဆို ကနြျော တို့ လှတျပေးတယျ။ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ ဆကျစပျရငျတော့ ကနြျောတို့ မလှတျပေးဘူး။ သူတို့ဘကျ မှာလညျး သူတို့ ဥပဒဆေိုတာ ရှိသလို ကနြျောတို့မှာလညျး တျောလှနျရေး စညျးကမျးကငျြ့ဝတျဆိုတာ ရှိတယျ။ ရခိုငျပွညျကို လကျနကျကိုငျပွီး ဝငျလာတဲ့ ဘယျဗမာစဈသားကိုမဆို ကနြျောတို့က ဖမျးဆီးပိုငျခှငျ့ရှိတယျ။ လိုရငျ လိုသလို အရေးယူပိုငျခှငျ့ ရှိတယျလို့ ကနြျော တို့မှာ စညျးကမျးရှိတယျ။ ဥပဒရှေိတယျ။
တိုကျခိုကျရေး ရဲပဲ ဖွဈဖွဈ၊ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ လိုအပျရငျ လိုအပျသလို ကနြျောတို့ဖမျးဆီးမှာ ဖွဈတယျ။ သူတို့က အစိုးရဝနျထမျးကို ဖမျးဆီးတယျဆိုပွီး ဖှပွီး စကားကို ဝါဒဖွနျ့တာပါ။ ကနြျောတို့မှာ တျောတျောမြားမြား ရှိပါတယျ။ နောကျ ထပျ လညျး စာရငျးတှေ ထုတျပွနျသှားဖို့ ရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ဆီက အပွဈမဲ့ ပွညျသူတှကေို လှတျပေးမယျဆိုရငျ ကနြျော တို့လညျး အဲ့ဒီ့ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ဝငျတှကေို လှတျပေးမယျ။ ဒါက အကွမျးဖကျ အဖှဲ့အစညျးရဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျး ရယျလို့ တော့ ပွောလို့ မရဘူး။ ခငျဗြားတို့က ကနြျောတို့လူတှကေို မတရား ဖမျးထားတယျ။ ကနြျောတို့ကလညျး ခငျဗြားတို့ လကျနကျ ကိုငျ တပျဖှဲ့က လူတှကေို ထိနျးသိမျးထားတယျ။ အလဲအလှယျ လုပျမယျဆိုရငျ ဒါနှဈဦးနှဈဖကျ အတှကျ ကောငျးတဲ့ ကိစ်စပဲ။ ပွီးရငျ သူတို့ရဲ့လူတှကေို သူဘယျလောကျ တနျဖိုးထားသလဲပေါ့။ နိုငျငံတကာမှာလညျး လဲလှယျ နကွေတာပဲ။ အစ်စရေးမှာ လညျး လဲတယျ။ အမရေိကနျမှာလညျး လဲတယျ။ ကမ်ဘာ့ အငျအားအကွီးဆုံး နိုငျငံတှတေောငျ လုပျနတောပဲ။ ထူးဆနျးတဲ့ ကိစ်စတော့ မဟုတျဘူး။
ဦးဝှတေ့ငျးကိစ်စကတော့ ခငျြးဖွဈလို့ ခူမီးဖွဈလို့ အမြိုးမြိုးတော့ ပွောကွတာပေါ့။ ကနြျောတို့ ရက်ခိုငျတပျတျော အနနေဲ့ ရနျသူ နဲ့ ပူးပေါငျးတဲ့သူ ရှိလာရငျ ကနြျောတို့က ဘယျလူမြိုးပါ။ ဒါက ဘယျလူမြိုးစုပါ ဆိုပွီး ခှဲခွားနမှော မဟုတျဘူး။ ရနျသူနဲ့ ပူးပေါငျးရငျ ရနျသူ့အားပေး၊ ရနျသူ့လူပါ ဆိုပွီး ထိနျးသိမျးရမှာပဲ။ ကိုဝှတေ့ငျးကို ကနြျောတို့ မထိနျးသိမျးခငျမှာ သူတို့ အုပျစု တှေ ဘာလုပျလဲဆိုတာကို ကနြျောတို့ သခြော သိတယျ။ သူ့ရဲ့ ထောကျလှမျးပွီး မဟုတျကဟုတျက တိုငျလိုကျလို့ ရှငျလကျဝ ရှာသားတှေ ၂၀ ကြျောလောကျ အခုထကျထိ ဖမျးဆီးခံရပွီး ထောငျထဲ ရောကျသှားတာ အခုထကျထိပဲ။ ဒါသာမနျ ရှာသား တှပေါ။ ပလကျဝမွို့နယျမှာ ရှိတဲ့ သတငျးတှကေို တပျမကို ပို့တာတို့ ကနြျောတို့မှာ သူ့ရဲ့ဖုနျးတှေ ဆိုရှယျ မီဒီယာ အကောငျ့ တှထေဲကနေ ကနြျောတို့ အကုနျလုံး Screen Shot ယူထားတာ ရှိတယျ။
အခု သူ့ရဲ့ facebook အကောငျ့ကို လော့ခလြိုကျပွီ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့က သူ့ရဲ့ အကောငျ့ထဲက အခကျြအလကျတှေ သူတို့ရဲ့Group Chat တှကေို ကနြျောတို့ အကုနျလုံး မှတျတမျး ယူထားလိုကျပွီးပွီ။ အဲ့ဒီ့မှာ သူတို့ ဘယျလောကျထိတောငျ ပွောလဲ ဆိုရငျ လူမြိုးရေးအရ သူတို့က ရခိုငျတှကေို မရှုစိမျ့ဘူးဗြ သူတို့ အုပျစုတှကေ။ ကနြျောတို့ သခြောကွညျ့လိုကျ တော့ ဘယျလောကျထိလဲ ဆိုရငျ လကျရှိ ဒီမိုကရစေီ စနဈအရ ပွညျနယျတှမှော တိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးတှေ ရှိတယျ။ ခငျြးပွညျနယျမှာ ရခိုငျလူမြိုး တျောတျောမြားတယျ။ ပလကျဝမှာရောပေါ့။ ခငျြးလှတျတျောမှာ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား ရေးရာ ဝနျကွီး ပျေါလာမှာကိုတောငျ သူတို့ ကွိုပွီး မလိုလားတဲ့ ဆှေးနှေးခကျြတှကေိုတောငျ တှတေ့ယျ။ အဲ့ဒီလိုဟာတှေ ပေါ့။
မေး။ ။ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေနေ အခကျြအလကျတှေ ရတယျဆိုတာက ဖမျးပွီးမှ ဖုနျးကနေ ရတာလား။ မဖမျးခငျ ကတညျးက Hack လုပျပွီး ရတာလား။
ဖွေ။ ။ အဲ့ဒါတှကေတြော့ ကနြျောတို့ လောလောဆယျ မဖျောပွသေးပါဘူး။ နညျးလမျး အမြိုးမြိုးပေါ့ဗြာ။
မေး။ ။ ဦးဝှတေ့ငျးကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆကျစပျမေးခငျြတာက AA အနနေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျထဲက အစိုးရအဖှဲ့ဝငျနဲ့ လှတျတျော အမတျတှကေိုရော စောငျ့ကွညျ့တာ ရှိလား။ ဘယျလို ပုံစံနဲ့ စောငျ့ကွညျ့လဲ။
ဖွေ။ ။ စောငျ့ကွညျ့တာပေါ့။ သခြောတာပေါ့။ စောငျ့ကွညျ့တယျ။ (ဦးဝှတေ့ငျးလို ကိစ်စမြိုးရှိလာရငျတော့) သူ့ကို ဘယျ အတိုငျးအတာ အထိ ကိုငျတှယျသငျ့လဲ ဆိုတာကို မူတညျပွီးမှ သသေခြောခြာတော့ ဆောငျရှကျရမှာပေါ့။ စောငျ့ကွညျ့တယျ ဆိုတာကတော့ လူတယောကျ အသကျကို မသသေငျ့တာကိုတော့ မသစေရေပါဘူး။ နောကျပွီး ဒီလူ တယောကျက ကနြျောတို့ ကို ဘယျလောကျအထိ အန်တရာယျပေးနိုငျလဲပေါ့။ အမြိုးမြိုး ဝဖေနျတာပေါ့ဗြာ။ ပွီးမှ လုပျသငျ့တဲ့ အတိုငျးအတာကို လုပျရမှာ ပဲ။ လူတယောကျကို အလိုလိုနရေငျး သတျဖွတျတာကတော့ လူသတျဝါဒပါ။
မေး။ ။ AA က အခုလညျး ဘူးသီးတောငျ NLD ဥက်ကဋ်ဌကို ထပျဖမျးတယျ။ ဒီလို နိုငျငံရေးသမားတှကေို ဖမျးဆီးတာက ဒီမိုကရစေီ စံနှုနျးတှအေရ လှတျလပျစှာ ပွောဆိုခှငျ့၊ မတူညီတဲ့နိုငျငံရေး ယူဆခကျြတှအေပျေါ လုပျဆောငျကွသူတှကေို ခွိမျးခွောကျတာပါလို့ ဝဖေနျမှုပွောဆိုမှုတှကေို ဘယျလို ပွောခငျြပါလဲ။ နောကျ AA ကို လှတျလပျစှာ မပွောရဲမဆိုရဲ မဝဖေနျရဲ ဖွဈလာရငျ ဒါက ကောငျးတဲ့ အလားအလာ ဖွဈပါ့မလား။
ဖွေ။ ။ ဒီမိုကရစေီခတျေမှာ ဒီမိုကရစေီ စံခြိနျစံညှနျးအကွောငျးကို ပွောရငျတော့ ပွောလို့ လှယျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တိုကျပှဲ တှေ ဖွဈနတေယျ။ ကနြျောတို့ ရခိုငျပွညျသူတှတေောငျ စဈရာဇဝတျမှုပေါငျး မြားစှာကို နိုငျငံတျောအစိုးရဆီမှာ ကြူးလှနျခံ နရေတယျ။ တကယျ့ ရခိုငျနိုငျငံရေး ခေါငျးဆောငျတှေ ကိုယျတိုငျက ဖိနှိပျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ နယျမွမှော သူမြားကို ကြူးလှနျတုနျးကတော့ ကြူးလှနျပွီး ကိုယျခံရတဲ့ အခြိနျမှာမှ ဒီမိုကရစေီ စံခြိနျစံညှနျး ဆိုတာတှကေို လြှောကျပွော တာက တော့ လကျတှမေ့ဆနျပါဘူး။ ဥပမာ မွနျမာစဈတပျ ခေါငျးဆောငျတှကေ ဒီမိုကရစေီခတျေ အကွောငျးတှကေို တဖှဖှ ပွောတာ ပေါ့ဗြာ။ တကယျကြ လှတျတျောထဲမှာ ဘာမဲ တပွားမှ မရဘဲ မကျြနှာပွောငျတိုကျ ဝငျထိုငျရဲတဲ့ လူလညျး ဒီမိုကရစေီ စံနှုနျး တှေ လြှောကျပွောတာပဲ။ ဒါက အပွောမှာပဲ ရှိတယျ။ အလုပျမှာ မရှိပါဘူး။
အခုက ရခိုငျပွညျလိုမြိုး ပဋိပက်ခတှေ တိုကျပှဲတှေ အမြားကွီးဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့ ရခိုငျပွညျသူတှေ တရကျ တရကျကို ဘယျလောကျသလေဲ။ ကလေးတှေ အဘှားကွီးတှေ သကျကွီးရှယျအိုတှေ။ အဲ့ဒီလောကျ စဈရာဇဝတျမှုတှနေဲ့ လူထု တရပျ လုံး ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ နယျမွမှောလာပွီး စဈရာဇဝတျမှုနဲ့ လူသားမြိုးနှယျအပျေါ ပွဈမှု ကြူးလှနျနတေဲ့လူတှကေို ထောကျခံ ပှဲလုပျတယျ ဆိုတာ တကယျ့ မကျြနှာပွောငျ တိုကျပွီး တကယျ့ရိုငျးစိုငျးတဲ့ လုပျရပျပဲ။ ဒါကို ကနြျောတို့က သဘော မတူဘူး။ ပွီးရငျ သူတို့ အဲ့ဒီ့နယျမွမှော တခုခု လုပျမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့ ခှငျ့ပွုခကျြကို တောငျးသငျ့တယျ။ နားလညျမှုလညျး ယူသငျ့ တယျ။ သူက ဘာမှ ဂရုမစိုကျတဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈနတေယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ သူ့ကို မေးမွနျး စရာတှလေညျး ရှိတယျ။
ဒါမွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဒီမိုကရစေီ စံခြိနျစံနှုနျးဆိုတာ အပွောမှာပဲ နားထောငျကောငျးရုံ ရှိတယျ။ တကယျဆို ပွညျသူတရပျလုံးက တကမ်ဘာလုံးက အပွောငျးအလဲဆိုတာကို Transition ကို လှညျ့စားခံနရေတာ။ ဒါ မလှိမျ့တပတျ ဒီမိုကရစေီ၊ အာဏာရှငျ တှေ ရဲ့ နောကျကှယျက လကျမညျးကွီးတှနေဲ့ ကွိုးဆှဲခံနရေတဲ့ ဒီမိုကရစေီ၊ ဒီ ဒီမိုကရစေီကို ကနြျောတို့ အယုံအကွညျ လညျး မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ တပျမတျောသားတှကေို ဖမျးထားတာကလညျး လူလဲမယျပွောထားတော့ တပျမတျောဘကျကတော့ မလဲဘူးလေ။ မလဲရငျ သူတို့က မလှတျတော့ဘူးလား။ တဆကျတညျး မေးခငျြတာက ဗိုလျခြုပျရဲ့ ဆှမြေိုးဖွဈသူတှလေညျး ရနျကုနျက ထောငျထဲမှာနပွေီး တရားစှဲဆို ခံထားရတယျ။ သူတို့ကိုရော လူလဲဖို့ ကမျးလှမျးခငျြတာ ရှိပါသလား။
ဖွေ။ ။ ဒီကိစ်စမှာကတော့ ကနြေျာ့ရဲ့ ညီအဈကို မောငျနှမတှကေို ဖမျးဆီးတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနြျောက တျောလှနျရေးကို ခေါငျးဆောငျနရေတဲ့ ခေါငျးဆောငျဖွဈတယျ။ ကနြျောက ပုဂ်ဂိုလျရေးကို အသားပေးပွီး ငါ့ညီမကို လှတျစေ၊ ငါ့ ညီကို လှတျစေ ဆိုပွီး သှားတောငျးဆိုမှာ မဟုတျဘူး။ သူတို့ကိုလညျး ကနြျောနဲ့ ဆကျစပျလို့ ဖမျးတယျဆိုပမေယျ့ သူတို့က ရခိုငျ ပွညျသူ တှေ ဖွဈတယျ။ တခွားရှာမှာ အဖမျးခံထားရသူတှကေိုလညျး ကနြေျာ့ညီအဈကိုတှေ သားသမီးတှလေို တနျဖိုးထားတယျ။ တရား မြှတမှုကို တောငျးဆိုရငျ အကုနျလုံးအတှကျ တောငျးဆိုသှားမယျ။ ငါ့ညီ ငါ့ညီမအတှကျ ဆိုပွီး တကူး တကတော့ ကနြျောတို့ တောငျးဆိုမှာ မဟုတျဘူး။ ပွီးရငျ သူတို့ဘကျက ဖမျးဆီးထားတဲ့ အရာရှိ စဈသညျတှေ ရဲဘျောတှေ အကုနျလုံးကိုတော့ ကနြျောတို့ တတျနိုငျသမြှတော့ ရှိတာနဲ့ မြှပွီး ကြှေးမှေးမှာပဲ။ ဒါကတော့ တျောလှနျရေးတခုရဲ့ လုပျသငျ့ လုပျထိုကျတာကို လုပျမှာပါ။ တတျနိုငျသလောကျတော့ စောငျ့ရှောကျမှာပါ။
ကနြျောထငျတာကတော့ သူတို့ဘကျက လုံးဝ မလဲဘူးလို့ ပွောတာက သူတို့ အရှကျကှဲတာပေါ့ဗြာ။ သူတို့ အရမျး အထငျ သေးထားတဲ့ ရခိုငျသူပုနျဆီမှာ လကျအုပျခြီပွီး အဖမျးခံရတယျဆိုတော့ သူတို့ အရှကျကှဲတာပေါ့။ ဒါကတော့ ရှကျပွီးမှ ပွောလိုကျတဲ့ စကားလို့ ယူဆပါတယျ။ သူတို့ဆီမှာတော့ သူတို့ ရဲဘျောတှေ အတှကျ မတ်ေတာကရုဏာတော့ ရှိမှာပါ။ ဒီလောကျ မတ်ေတာတရား မရှိဘူးဆိုလညျး သူ့ရဲဘျောတှရေဲ့ကံတရားပေါ့။ သူတို့ကို ကနြျောတို့ ဆကျထိနျးသိမျးထားမှာပါ။ သူတို့ကို ထိနျးသိမျးထားလို့ ကနြျောတို့ အရှုံးမရှိပါဘူး။ သဘောက သူတို့ကို ကနြျောတို့ ထိနျးသိမျးထားတယျ ဆိုရငျ သူတို့က စဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျတဲ့အထဲမှာ ပါတယျ။ သူတို့ဆီက လူသကျသတှေေ ရတယျ။ ဘယျရှာမှာ ဘယျသူက မီးရှို့ခဲ့ တယျ။ ဘယျသူက ဘယျလို အမိနျ့ပေးခဲ့တယျဆိုတာကို ဒီလူတှကေို သကျသခေံခိုငျးလို့ ရတယျ။ သူတို့ကို ထိနျးသိမျးထားလို့ အကြိုး မယုတျဘူး။
သူတို့က ငါတို့ကို ငါတို့လူကွီးတှကေ ပဈပယျလိုကျပွီလို့ အမှနျတကယျ ခံစားရတဲ့အခြိနျမှာ သူတို့ကို ဘာခိုငျးခဲ့တယျ ဆိုတာ ပွောလာရငျ ကနြျောတို့က သူတို့ကို တရားစှဲဖို့ သကျသရေသှားပွီ။ ကနြျောတို့ဘကျက အရှုံးမရှိပါဘူး။
မေး။ ။ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးထားတဲ့ စဈသားတှကေို လိုခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ သိရဖို့ မေးတဲ့အခါ ဘယျလို ပုံစံနဲ့ စဈဆေးလဲ။ တပျတှထေဲမှာ စဈဆေးသလိုပဲ လိုခငျြတဲ့ အခကျြအလကျ မရရအောငျ နညျးမြိုးစုံ သုံးသလား။
ဖွေ။ ။ သူတို့ စဈဆေးတာနဲ့ကနြျောတို့ စဈဆေးတာ မတူပါ